Okuthunyelwe kwakamuva | I-Crypto Gator | I-Best Cryptocurrency, iBlockchain ne-Forex News Aggregator
I-Crypto Gator | I-Best Cryptocurrency, iBlockchain ne-Forex News Aggregator
I-Best Cryptocurrency, iBlockchain ne-Forex News Aggregator
Izindaba ze-Cryptocurrency kanye ne-Forex
Trade Forex NjengePro Ngale Broker Ovelele
Ungathengisa kanjani i-forex ngokuzenzekelayo futhi wenze imali engenayo | I-CTrend FX - Isiginali ye-Forex yokuhweba ezenzakalelayo
I-Automated Forex Trading Signal CTrend FX - Setha kanye bese uhweba ku-autopilot ukuze uthole imali engenayo
Funda kabanzi Ngama-Cryptocurrensets
Ama-Cryptocurrensets Wokuhweba NjengoPro
Thola Isivuno Esiphezulu Kumafa Wakho we-Cryptocurrency
Ukushintsha Ukuhweba Yakho Cryptocurrency
Ukugcina i-Crypto Yakho Iphephile
Izinsiza Zokubamba Iwebhu
Ukuhweba okuzenzakalelayo kwe-Forex Signal CTrend FX
Isitolo Sezobuciko Nezandla
Izindaba Zokuhweba ze-Forex 0
I-CTrend FX - Isiginali ye-Forex yokuhweba ezenzakalelayo
Vula i-akhawunti ye-forex yokuhweba bese ufinyelela ku- $ 250 kumabhonasi wokuhweba! *
I-CTrend FX © uhlelo lokuhweba lwesikhathi esiningana. Ubungozi buhlukene futhi uhlelo lokuhweba lulandela indlela eqinile yokulawulwa kwezinhlekelele.
Lolu uhlelo lokuhweba jikelele, okusho ukuthi luyakwazi ukukhiqiza imiphumela emihle kakhulu ezimeni ezahlukahlukene zemakethe futhi ngamasheya amaningi wezimali noma izinsimbi ezithengiswayo. Uhlelo lusekelwe ekuhlaziyweni kwezobuchwepheshe, futhi ludayiswa ngokuzenzekelayo. Ihlolwe njalo futhi ibuyekezwe njengoba kudingeka ukuze isebenze kahle kakhulu. Lolu hlelo lokuhweba lube nokusebenza okuhle kakhulu okungalandelelwa https://www.mql5.com/en/signals/834540.
IMIYALELO NEZincOMO ZOKUTHI UNGALANDELWA KANJANI NGALOKHU KOPHAWULA NGOKUQONDILE NGESIKHATHI SE-BROKER PORTAL
Umdayisi njengamanje unikela ngephromoshini yebhonasi yokuhweba efinyelela ku- $ 250 *. Imininingwane eminingi ngale phromoshini iyatholakala LAPHA.
Nazi izinyathelo zendlela yokuthola i-akhawunti yabatshalizimali exhunywe ne-akhawunti eyinhloko ye-MAM enikezela ngesiginali yokuhweba:
1. Vula i-akhawunti yakho ye forex yokuhweba LAPHA.
2. Lapho i-akhawunti seyakhiwe futhi yamukelwa, chofoza u- “open account investor” nge-portal bese ufaka i- “CTrend FX” ebhokisini locwaningo.
3. Chofoza u- “invest with this MAM”, ugcwalise ifomu bese uthumela isicelo.
4. Umthengisi uzocubungula isicelo sabatshalizimali kungakapheli amahora ayi-12.
5. Uma sesiphasisiwe, uhlelo luzokhiqiza i-akhawunti yabatshalizimali bese luyixhuma ne-MAM.
6. Ngemuva kwalokho ungakhokhela i-akhawunti yabatshalizimali esanda kudalwa ngokumane udlulise izimali zisuka ku-akhawunti yakho ekhona kumthengisi ziye kwi-akhawunti yakho esanda kwenziwa ye-MAM investor.
Ukulandela isignali nge-akhawunti yabatshalizimali be-MAM kususa isidingo sokubhaliselwa kwe-MQL5.com nyangazonke kanye nokubhaliselwe kweVPS, ngaleyo ndlela kukongela inkinga yokuphinda ubhalise futhi kungasekho mali ebekiwe yokubhaliselwa yanyanga zonke. Uzokwazi futhi ukuqapha yonke imisebenzi yokuhweba nge-akhawunti yakho ngqo kusuka kudeshibhodi engosini yomthengisi. Imodeli yesinxephezelo ye-MAM isethwe kuma-25% wenzuzo ngesigatshana se-High-Water Mark, ngakho-ke umhwebi we-MAM uthola umvuzo kuphela lapho inani le-akhawunti yabatshalizimali lenyuka ngaphezu kokutshalwa kwemali kokuqala.
Abatshalizimali abadingi ukuthi ama-terminals abo e-MT4 avule i-24/7 ku-VPS, abathengisa bazokwabiwa ngokuzenzakalela ngokuya ngezilungiselelo zabo zokulingana (kufanele kusethwe ku-100% ukuthola isignali ye-pro-rata elandelayo).
IMIYALELO KANYE NEZincOMO ZOKUTHI UNGALANDELA KANJANI LESI SIGINESHA ku MQL5.COM
1. Vula i- “Standard MT4” i-akhawunti yokuhweba ngaphambili LAPHA. Lona ngomunye wabathengisi abahamba phambili abane-slippage ephansi kanye nesikhathi sokuphumula esihle kakhulu sokwenza / iseva.
2.Vula i-VPS ukuze itheminali yakho ye-MT4 isebenze i-24/7 futhi isebenzise ukuhweba nge-latency ephansi / ukushelela LAPHA. Lokhu kuzokusindisa ezindlekweni zokuhweba esikhathini eside.
3. Bhalisela ukukopisha ifayela le- I-CTrend FX isignali LAPHA kusuka ngaphakathi kwetheminali ye-MT4 kumshini we-VPS.
Kunconywa ngokuqinile ukuthi okungenani kube ne- $ 6000 ku-akhawunti yokuhweba yokuphatha kahle ubungozi kanye nobukhulu besikhundla. Sincoma futhi ukuthi ngezikhathi ezithile uhoxise imali kwi-akhawunti yakho ye-forex yokuhweba. Sincoma ngokuqinile ukusebenzisa i-terminal yakho ye-MT4 ku Isevisi ye-VPS etholakala eduze kwamaseva wokuhweba eNew York City. Lokhu kuzokongela imali ngokuhamba kwesikhathi ngokunciphisa izindleko zokwehla. Ukuze ulandele ngokunembile lesi siginali, kungcono ukuba ne- akhawunti yokuhweba ne umthengisi ofanayo esidayisa naye. Ziyi- broker omuhle kakhulu ngesevisi enhle yamakhasimende, ukusabalala okuphansi nokwenza okumangazayo okusheshayo nge-zero isikhathi sokuphumula noma ukunqamula. Sicela uzikhandle ngokufanele mayelana lo broker ngoba nguwe kuphela obhekele ukuphepha kwezimali zakho. Umthengisi isebenza ngaphandle kweNew Zealand, futhi ilawulwa yiRejista Yomhlinzeki Wezinsizakalo Zezezimali (inombolo: FSP403326).
IMIYALELO KANYE NEZincOMO ZOKUTHI UNGALANDELA KANJANI LESI SIGINESHA ku ZULUTRADE
Ngenye indlela, futhi ungabhalisela i- I-CTrend FX isinali lokuhweba nge-forex ezenzakalelayo nanoma yimuphi umthengisi ozikhethele yena LAPHA.
Gcina ukhumbula ukuthi ukuhwebelana nge-Forex kubandakanya izinga eliphakeme lobungozi ngenxa yokunyusa nokunyakaza kwentengo okusheshayo okwenzeka ezimakethe zemali. Sicela waziswe ngesihloko ngaphambi kokucabanga ukufaka engcupheni imali yakho.
* Ezinye izimo zingasebenza.
* Ukukhushulwa komuntu ngamunye kungahluka.
* Ukuhweba ngokushintshaniswa kwamanye amazwe ("Forex"), ikusasa lezimpahla, izinketho, ama-CFD kanye nokubheja okusakazeka emarheni kunengozi enkulu, futhi kungahle kungalungeli bonke abatshalizimali. Ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuhweba ngemali yakwamanye amazwe ("Forex"), ikusasa lezimpahla, izinketho, ama-CFD noma ukubheja okusakazwayo kufanele ucabangele ngokucophelela izinhloso zakho zemali, izinga lesipiliyoni sakho, kanye nesifiso sobungozi. Ithuba likhona lokuthi ungagcina ukulahleka kwezinye noma zonke izimali zakho ozifakile ngakho-ke akufanele ucabangele ngemali ongakwazi ukuyilahla. Kufanele wazi zonke izingozi ezihambisana nokushintshaniswa kwamanye amazwe, ikusasa lezimpahla, izinketho, ama-CFD nokuhweba kwe-Spread Betting, futhi ufune izeluleko kumeluleki ozimele uma unokungabaza. Imbuyiselo edlule ayikhombisi imiphumela yesikhathi esizayo.
* IMIPHUMELA YOKUSEBENZA YANGAPHAMBILI AYIKHO INDLELA EDINGEKAYO YEMIPHUMELA YEKUSASA. AKUKHO OKUMELELEKILEYO OKWENZIWA UKUTHI YILUPHI I-AKHAWUNTI EYOKWENZA NOMA CISHE IZUZE IZINZUZO NOMA UKULAHLEKELWA OKUFANELE KULABO ABABONISIWE. KUNEZINYE IZIMPAHLA EZIMANGALISWA EZIPHATHELENE NEZIMAKI NGOKUVAMILE NOMA EKUSETSHENZISWENI KWENQUBO ETHILE YOKUHWEBA ENGEKE ILANDELWE NGOKUGCWELE NGEMIPHUMELA YOKUSEBENZA YANGAPHAMBILI. AMAKlayenti ALINDELEKILE KUFANELE AQAPHELE NGOKWENGEZIWE UKUBEKA UKUTHEMBEKA NGOKUQINISEKILE KWEMIPHUMELA YOKUSEBENZA YANGAPHAMBILI KANYE AKUFANELE ASIBEKE ISINQUMO SABO SOKUTSHALA IMALI KUPHELA UHLELO LOKUHWEBULA LWEDWA EMSEBENZINI WANGAPHAMBILI OWENZIWE. OKWENGEZIWE, EKWENZENI ISINQUMO SOKUTSHALA IZIMALI, AMAKHASIMENDE ALINDELELAYO KUFANELE ATHEMBEKE EKUHLOLWENI KWABO NGOKOMUNTU NOMA NGOKWENZA IZINQUMO ZOKUHWEBA KANYE NEMIGOMO YESIVUMELWANO SOKWELULEKA EBandakanya IZIMANGALISO NEZINGOZI.
By I-Crypto Gator Posted on Izinsuku 6 edlule
I-Blockchain ne-Cryptocurrency News 0
I-Polygon (MATIC) Umhlahlandlela Wokulima Wokuvuna
Ngonyaka odlule ihlobo belinemisebenzi eminingi yokulima isivuno esebenza ku-ethereum futhi konke kuyizinkomba zokuthi ukulima okuningi kwesivuno kuzoqala ku-polygon kusukela manje futhi izinkomba ezinkulu ezishayela lesi sikhundla yilezi:
Izivumelwano zomdabu zase-Ethereum ezifana ne-Aave, Curve & Sushi Swap zifudukele e- I-Polygon inethiwekhi.
Abatshalizimali bangasebenzisa ingxenyana yezindleko abebengazithola ku-mainnet ye-Ethereum ukwenza uhlobo olufanayo lokulima isivuno ku-polygon.
I-Binance smart chain incintisana ngqo ne-polygon ngoba i-polygon yisisombululo sokukala se-Ethereum.
I-Polygon njengamanje ine-base yomsebenzisi esheshayo futhi ekhulayo nsuku zonke, enesisombululo sokukala ungqimba 1 esidlula i-Ethereum ngokwenziwe.
Izimali eziphezulu zegesi ku-Ethereum zingukucishwa okukhulu kwabatshalizimali bakwaDefi futhi le mali yegesi ibonakala ilingana ngqo nentengo ye-Eth ngakho-ke abatshalizimali bakhetha i-polygon ngenxa yezindlela zayo eziphansi zeDeffi.
Ngaphambi kwalokhu, kube nemizamo ebumbene yezinhlangano ezinjenge-flash bots ne-Binance smart chain kepha zonke ziye zakhohliswa ngandlela thile yizinkinga ezinjengokuhlaselwa kwemali mboleko yama-flash kanye nama-hacks.
Ukufuna ngobuqotho imali ephansi kanye nokuthengiselana okusheshayo kwaveza i-polygon futhi abalimi abaningi abavunayo basebenzisa lokhu ukuze basebenzise kakhulu ulwazi lwabo lokulima isivuno.
I-Polygon isebenzisa ubufakazi be-algorithm yokuvumelana kwesiteki yingakho izindleko zokusebenzelana kunethiwekhi yayo ziyingxenyana nje yezindleko zokwenza inethiwekhi ye-Ethereum.
Vuna ukulima ngePolygon
Ayini Amapulazi Okukhiqiza Okudala?
1). I-Dex - Ukushintshwa Okusheshayo:
3). Okwezimali zePolycat - Isihlanganisi Sesivuno:
Kuyizinkulungwane eziningi zezinketho zokuhola ezitholakalayo zabasebenzisi beDeFi abanethemba lokuthola isivuno esikhulu kumafa abo e-crypto.
Inketho yokuqala ivuliwe I-Polygon Ukushintshwa Ngokushesha; kungukushintshisana okuthandwa kakhulu kunethiwekhi ye-polygon, inezimali eziphansi zokuthengiselana / izimali zegesi ezinevolumu ephezulu okuholela kumakhomishini aphezulu kubahlinzeki bezimali (LP). Ama-APY akhuphuka lapho abahlinzeki bezimali (i-LP) bethola imivuzo esheshayo kumachibi athile futhi le mivuzo isukela kokungabelwe okungama-30% kumabhangqa ezinhlamvu zemali azinzile kuye ku-200% uma amabhangqa okuhweba afaka i-QUICK.
Okunye ukushintshana okufana ne-Sushiswap ne-Curve nakho kunikela ngemiklomelo yokunisela umlomo nge-Matic ngaphezulu kwemali ekhokhwayo yamachibi abo okuphuza.
Abasebenzisi bangabeka amathokheni abo okukhipha imali ukuze bakhiqize ama-aggregators afana ne-yearn. Ezezimali kunethiwekhi ye-Ethereum.
Abasebenzisi bangakhuphula ukubuya kwabo lapho basebenzisa i-aggregator yesivuno ukufaka imali yabo kabusha kumachibi afanayo. Ama-APYs ku-polygon akhule aze aphakama kakhulu ngoba amapulatifomu afana ne-Adamant Finance nawo aqalise ithokheni lawo lokubusa kanye namathokheni echibini lezimali zamanzi echibini laseSushi le-USDT / USDC njengamanje anethuba elingama-99% le-APY.
Njengoba nje bekulindelwe, amapulazi akhiqizwayo akudala abuyile futhi angcono futhi adume kakhulu kuze kube manje yi-polywhale. Abasebenzisi banenkululeko yokubeka ama-cryptocurrensets abo echibini le-polywhale futhi bazothola ithokheni labo lendabuko le-KRILL.
Kubalulekile futhi ukuthi abasebenzisi bazi ukuthi kuwo wonke amadiphozithi abo e-crypto, ingxenye izosetshenziselwa ukuthenga kabusha i-KRILL emakethe. Okwamanje abasebenzisi banelungelo lokuthola kuze kufike ku-80% APY ngokumisa nje i-MATIC, bese beqhubeka nokuvuna imivuzo ye-KRILL bese beyibuyisela echibini labo ukuze bafike ku-2,500% APY, okuyinzuzo enkulu. Noma kunjalo; kunesidingo sokuthi abasebenzisi bazi ukuthi intengo yamathokheni e-KRILL ingahle iguquguquke futhi amapulazi azama kakhulu ngakho-ke ukuthatha le ngozi ekuqapheliseni kuzonikeza wonke umsebenzisi useyili obushelelezi emkhakheni we-polygon wokulima we-Defi.
Ama-blockchains amabili we-polygon (Matic) DeFI athola ukubambeka okungathi sína ngenethiwekhi ye-Ethereum, abe wukwanda okuphawulekayo kwamaphrojekthi we-Ethereum DeFi ohlelweni lwe-polygon ecosystem. Lawa maphrojekthi yi-sushiSwap ne-Curve. Ziye zaba yipulatifomu yokulima isivuno eminingi evela ekuqaleni i-polygon blockchain. Lokhu kubuyekezwa kuzobe kugxila kumaphrothokholi omdabu amathathu (3) okungukuthi i-QuickSwap, I-PolyZap, Futhi I-Polycat Izimali.
1). Dex - Ukushintshwa Ngokushesha:
Uhlobo lokushintshanisa: ukushintshaniswa okwabelwe amagunya, ikakhulukazi imfoloko ye-Uniswap.
Abahlinzeki bemali bathola imali engu-0.25% kuyo yonke imisebenzi ngokuya ngesabelo sabo% echibini.
Abatshalizimali bangakwazi ukuhoxisa kalula izikweletu zabo lapho izimali zengezwa echibini bese kuvunyelwa ukwanda ngesikhathi.
Usukhululekile ngokuphelele ukufaka imali oyikhethayo yamathokheni e-liquidity ethokheni ku-Quickswap protocol governance token ($ QUICK).
Kubukeka sengathi kube nokukhuphuka okukhulu komsebenzisi okungu-1297.45% ngo-90d kanye no-7073.48% wokwenyuka kwevolumu kumthamo we-90d.
Lokhu kubukeka kukuhle kuze kube manje, intengo yamathokheni asheshayo ikhombisa ukuhlangana okuphezulu nedatha ekhona ye-Quickswap's on-chain.
Okwamanje isivuno samaphesenti sonyaka (ama-APYs) sezinqubo zezimayini ze-Quickswap zezimayini kusuka ku-20% kuye ngaphezu kwe-180000% kuma-pair we-BIFI-QUICK. Kunesidingo sokubheka futhi ubungozi bokulahleka okungapheli ngoba kudingeka ukuhlinzekwa kwempahla.
noma kunjalo ukusebenza kwe-QuickSwap on-chain kuyamangalisa futhi kufakazela ukuqubuka kusukela ngoMbasa.
I-PolyZap ipulazi libuye libe ungqimba 2 Dex kanye nephrojekthi yokulima isivuno efakwe ku-polygon. Ipulazi layo leZap kanye namachibi wefu eZap avumela abasebenzisi ukuthi bathole $ PZAP, lo I-PolyZap i-ecosystem ikhuthazwa ngokubeka amathokheni echibini lamanzi noma amanye amathokheni.
1.Zap Amapulazi: Bamba amathokheni akho e-LP ukuze uzuze $ PZAP.
Amachibi we-2.Zap: Bamba amathokheni owodwa ukuze uthole i- $ PZAP.
Ideshibhodi engenhla ikhombisa ngokusobala ukuthi $ PZAP Intengo yethokheni ihlobene kakhulu ne- I-PolyZap Umthamo we-Farm on-chain.
3). Izimali zePolycat - Isivuno Aggregator:
inokufana okuningi nezinketho ezifana ne-Yearn. Ezezimali ezisebenza ku-Ethereum ne-pancake bunny kumaketanga we-Binance smart (BSC). Manje kungenzeka ukufaka imali okuhlanganiswe ngokuzenzakalela ukukhulisa ukubuya ngoba I-Polycat ezezimali zizosebenza njengesihlanganisi sesivuno.
I-Polycat ezezimali zinikeza isivuno samapulazi, amachibi, nezindawo zokukhiqiza ezinjenge. izindlu, amapulazi namachibi.
Ama-vaults: abasebenzisi bekhompiyutha ezenzakalelayo baveza bese beyisebenzisa ukukhulisa idiphozi yabo.
Amapulazi: Bamba amathokheni akho e-LP ukuze uzuze $ FISH, ithokheni yokusetshenziswa kwe- Izimali zePolycat. Udinga ukuhlinzeka ngemali engu- $ FISH kuqala ku-QuickSwap noma kuSushiSwap.
Abasebenzisi bangathola kalula I-Polycat amathokheni okusetshenziswa kwezezimali ($ FISH) ngokubeka amathokheni abo we-liquidity pool (LP) ukuze bazuze $ FISH, kepha kufanele, kuqala kunakho konke, banikeze ukwamukelwa kwempahla ye $ FISH ku-Sushiswap noma ku-Quickswap.
Amachibi: Bamba amathokheni owodwa ukuze uzuze $ FISH.
Okwamanje, isivuno sephesenti sonyaka esiphakeme kunazo zonke (i-APY) se- $ FISH-MATIC ukulima e I-Polycat ezezimali zingama-83,831.10%, noma kunjalo, kunesidingo sokubhekana nokwehla kwamanani entengo ye- $ FISH ithokheni ejwayelekile ngayo yonke i-crypto yangempela.
$ FISH Intengo inokuhlobana okusondele ne- Izimali zePolycatAbasebenzisi abasebenza ngamaketanga nokuthengiselana.
By I-Crypto Gator Posted on Emasontweni 3 edlule
Isiginali ye-ZuluTrade ehamba phambili elandelayo kulandela ukubuyekezwa kwesikhulumi
Ukuhwebelana ngezezimali nokuthengiswa kwempahla kungukubandakanya isikhathi eside, empeleni ukuthenga nokuthengisa izimpahla zezezimali ngamathunzi ahlukahlukene usebenzisa amathuluzi nobuchwepheshe obuzenzakalelayo. ZuluTrade ingenye yamapulatifomu wokuhweba anemisebenzi eminingi enikeza inqwaba yezinketho zokuhweba ngamakhophi ku-forex, ama-indices, amasheya we-cryptocurrensets nemakethe ye-cryptocurrensets.
Ukukopisha ukuhweba kuyinqubo lapho abathengisi bekopisha ukuhweba kwabahwebi abanolwazi ngaphakathi kwezimakethe zezimali ukuze bathole imiphumela efanayo ekuhwebeni. ZuluTrade inikeza ukusebenza okuzenzakalelayo okuphelele kwalezi zinqubo ezihambisana nezindlela zokuphendula nokwabelana ngolwazi. Kusukela namuhla, ZuluTrade uqoqe abahwebi abangaphezu kwesigidi ngevolumu yokuhweba engaphezu kwama- $ 800 billion.
Umlando Wengemuva weTradeTrade
Lo mlando uza ngemuva kwezicelo eziningi kakhulu zabathandi bamaZulu abasemkhakheni wezezimali. Zulu Trade yasungulwa ngesinye isikhathi ngo-2007 nguLeon Yohai noKosta Eleftheriou. Inhloso kuphela kwakungukwakha inkundla yokuhweba evumela ukuhweba ngamakhophi ngaphandle komthungo, ngo-2009 inkampani yayivele inabathengisi abangongoti abangaphezu kuka-4,500 2014 abanikeza amasiginali futhi bekopisha amaphothifoliyo okuhweba. Ukuhweba kwamaZulu ngonyaka we-2015 kungeze izici ezifana neZulu Guard nokusekelwa kwamakhasimende nayo, yabe isiqhubeka nokuthola ukubambisana neSpotOption ukudala izinketho zokuhweba kanambambili. Ukuhwebelana kwamaZulu kwenze impumelelo emangalisayo ngo-XNUMX okwagcina kutholele indondo (ilayisense yokuphathwa kwamaphothifoliyo e-EU) evela e-European Union, lokhu kwaletha Ukuhweba kwamaZulu embukisweni womhlaba wonke, wonke umuntu wabona ukuba semthethweni kwawo namathuba.
Hlangana nenkundla yokuhweba kaZulu
Uma kukhulunywa ngokuhweba kufayela le- Isiteji sokuhweba samaZulu impumelelo yomthengisi ixhomeke ekhonweni lakhe lokubona nokukopisha ukuhweba kwabathengisi abangochwepheshe endaweni yesikhulumi. Ipulatifomu yokuhweba yamaZulu ayiyona indawo yokuceba ama-ponzi kubantu abanomqondo wokucabanga 'wokuceba ngokushesha', kungenzeka ukubona uchwepheshe ohweba futhi enza izigidi kuleli sonto abese eqala ukulahlekelwa ngesonto elizayo kepha akwehlisi isithunzi nganoma iyiphi indlela inzuzo yesikhulumi sokuhweba samaZulu, konke okudingeka ukwenze njengomhwebi ukwenza ucwaningo lwakho bese uthola okungenani abathengisi abangochwepheshe abahle noma abathathu abaneminyaka edingekayo yesipiliyoni (iminyaka emi-4 noma emi-5).
Ipulatifomu yokuhweba iqukethe izinketho zokuhweba okukhethwa kukho kanambambili, i-forex, amasheya kanye nempahla ethandekayo efana namafutha nezinkomba ezifana ne-NASDAQ. Uthola ithuba lokuhweba ngalezi zinketho usebenzisa amasu okuhweba wabadayisi abangochwepheshe.
Ipulatifomu ihlukaniswe izingxenye ezimbili:
(Ingxenye A) Abahlinzeka ngamasiginali: Bangabadayisi abangochwepheshe abelana ngamasu abo nabalandeli bese kuba nezinxephezelo ezincike empumelelweni yamasu abo.
(Ingxenye B) Abalandeli: kungenzeka bangabi ngabahwebi abangochwepheshe kepha bangakopisha amasu abadayisi abangochwepheshe kanye namasu (amasu) abanye abalandeli abangahle bathole amazinga athile okuphumelela ngenkathi behweba.
Ngenxa yokuzibophezela osekunesikhathi eside nokusekelwa kwamakhasimende okungalungiswanga ukuhweba kwamaZulu kuthole isilinganiso sokwesekwa kweBrokerNotes kathathu kweAAA.
Izici zePlatform yokuhweba kaZulu:
(1) Ukusabalala Namakhomishini
Abahwebi ikakhulukazi babheke lesi sici ngoba sinquma inzuzo yabo yokuthatha ngenkathi behweba. Umthengisi ukhokhisa ikhomishini ngakho konke ukuhweba ngaphezu kokusakazeka okuvele kukhona kodwa ama-akhawunti wabathengisi axhumene nenkundla yezokuhweba yamaZulu azokhokhiswa i-zero commission ngu Umdabu wabomdabu abangamaZulu (AAAFx).
Amaphesenti wokusabalalisa noma amanani (umehluko phakathi kwentengo yokuthenga nokuthengisa) unikezwa ngabathengisi abahlukile; kodwa-ke uhlobo lwemali ebhangqiwe nesikhathi sokuhweba nakho kungathinta ukusabalala okungukuthi ukusabalala kuyanda lapho kunentengiselwano ephezulu yemakethe futhi kunciphisa lapho kunokuguquguquka kwemakethe okuphansi.
Njengabahwebi besikhathi esizayo abanolwazi lokuhwebelana phakathi kwe-crypto ngibona kukuhlekisa impela ukuthi ukuhweba kwamaZulu kunikeza izindlela ezihlukile ekuhwebeni kwayo. Iqiniso ukuthi amandla asetshenziswayo anamandla okwandisa amaholo kanye nokunciphisa amaholo; kodwa-ke, kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukwazi ukuthi ukusebenzisa izilinganiso eziphakeme (1: 1000) kusho umkhawulo ophansi, ozokhuphula izinga lemajini nomugqa wamahhala, yize lokhu kungaholela ekwandeni ngokweqile, ukwehliswa kwe-akhawunti ekugcineni kugqame. Ngakho-ke uphatha le ngozi kangcono uma uhweba usebenzisa amandla we-1: 100.
(3) Imali Yokuhweba:
Yonke ipulatifomu yokuhweba inezimali zayo zokuhweba kanti neplatifomu yokuhweba yesiZulu ayisiyodwa, kunesidingo sokuthi wazi izindleko ezengeziwe eziza nokuhweba ku Umsamo wesiZulu, izimali ezikhokhiswayo zixhomeke kumbhangqwana wemali ethengiswayo, noma lezi zimali zingamile zimi zenza inzuzo ngezikhathi ezithile futhi abadayisi be-intraday abazikhokhi lezi zimali. Azikho ezinye izindleko ezingeziwe ngaphandle kwalokhu okushiwo ngenhla, ngisho nochwepheshe abadayisi obakopayo bakhokhelwa ngqo ukuhweba ngamaZulu kwikhomishini yezohwebo. Kunesidingo sokuthi wazi futhi ukuthi ukuhweba kwamaZulu kunikela kakhulu maqondana nebhonasi yediphozi nokukhushulwa ngakho-ke ukuvakashela amawebhusayithi okuhweba akwaZulu ngezikhathi ezithile kuzokunika ithuba nokufinyelela kulawo mathuba wokunatha umlomo.
(4) Imali Engaphansi Nasekuqaleni:
IZulu Trade iyakuqonda ukukhwabanisa komhlaba okukhona manje ngakho-ke inesidingo esiphansi sokufaka imali. Idiphozi ephansi edingwa ngabathengisi ngaphakathi kwesikhulumi sokuhweba samaZulu isukela ku- $ 1, £ 210, $ 300, 300 AUD, € 250 kuye ku-25,000 JPY ngokulandelana.
Amazwe angasebenzisa ukuhweba kwamaZulu:
Ipulatifomu yeZulu Trade ayigcini nje ngokukhula ezihlokweni zenani layo kepha iyakhula futhi ekuhlanganisweni kwezindawo. Zulu yamukela abathengisi abavela e-United Kingdom, United States, Canada, Singapore, Hong Kong, Germany, Norway, Italy, Qatar, Sweden, Australia, South Africa, Denmark, Saudi Arabia, Luxembourg, Kuwait nakwamanye amazwe amaningi.
Abaphathi bamapulatifomu akwaZulu Trade bayaziqonda izimbangi namakhophi angaphakathi kwendawo yokuhweba ngakho-ke kuyadingeka ukuthi wazi ezinye izinzuzo zohwebo lwamaZulu.
Izindlela Zokusebenzisa Isizinda Sokuhweba Sezulu
(1) Isixhumi esibonakalayo sokuhweba esisebenziseka kalula esingasetwa ngaphakathi kwesikhathi esifushane kakhulu.
(2) Amandla wokukhetha umdayiseli wangaphakathi noma wangaphandle: Ukuhweba kwamaZulu kunabathengi bomdabu abangabakho (AAAFX) abakhokhisa imali encane kakhulu yekhomishini kepha ungakhetha futhi omunye umthengisi wangaphandle ozohweba naye.
(3) Abahwebi abahlukahlukene: ngoba konke kumayelana nokuhweba ngamakhophi, udinga abathengisi abaningi ongabalandela futhi benze okuhle kakhulu, ukuze ukwazi ukulandela abathengisi abayi-5-10 noma nangaphezulu kepha njalo kuyalulekwa ukulandela izinombolo 'Ukhululekile ngokuphelele ngoba ukulandela abathengisi abangama-20 kuye kwabangu-40 kungakwenza uthambekele kubadayisi abasezingeni eliphansi.
(4) Ukuhweba ngezimpahla ezahlukahlukene: Ukuhweba kwamaZulu kuwumsebenzi omningi ngoba uyakwazi ukuhweba ngezimali ezahlukahlukene kufaka phakathi imali yedijithali ngisho nempahla.
(5) IZuluRank isici esisodwa esiyingqayizivele esiklelisa abadayisi abangochwepheshe ukuze abalandeli bakwazi ukubona kalula abathengisi abafanele futhi benze izinqumo zabo.
(6) Abahlinzeki bamasignali banezindlela ezahlukahlukene zokuhola.
(7) Izici zokuhweba zenhlalo zinikeza ithuba lokubandakanya abanye abathengisi, kwenza ukwabelana ngolwazi kube lula.
(8) Isevisi yokuhweba ngamakhophi ezinikezelwe ye-crypto inikeza ithuba elihle kakhulu labo abathanda i-crypto ukuthola inzuzo.
Ububi Bokuhweba KwamaZulu
Okulandelayo ngezinye zezinto ezimbi zeZulu Trade Platform.
(1) Inezindlela ezimbalwa zokukhokha.
(2) Ukuba ngumhlinzeki wesiginali kungaba nzima kakhulu.
(3) i-algorithm yesikhundla samaZulu namanje ayinembile kangako ngabadayisi bochwepheshe abasezingeni.
(4) Izici zokuhweba zenhlalo zisesezingeni eliphansi kakhulu.
(5) Ukusetshenziswa, ukutholakala nokukhethwa kwama-crypto-assets kunqunywa ngabathengi bama-broker hhayi ngesikhulumi sokuhweba samaZulu.
Sengikushilo konke lokhu, ngingakusho ngokuzethemba lokho Zulutrade.com inikeza izinketho zokuhweba ezibabazekayo kubo bonke abadayisi (abanolwazi nabangenalwazi). Isisekelo somsebenzisi sikhula ngejubane lokukhanya, noma ngabe inesikhulumi sokuhweba esisebenziseka kalula, kungcono, kushibhile futhi kunenzuzo enkulu ukuhwebelana nomthengisi wendabuko (AAAFx). Ukuhweba ngenzuzo kulula uma unamakhono nesiteji esifanele sokucija amakhono akho, inkundla yokuhweba yamaZulu iqinisekisa ukuthi inzuzo iqinisekile futhi isobala.
By I-Crypto Gator Posted on April 13, 2021
Umhlahlandlela Olula Wokuhweba Kwangaphambili
Lapha at I-CryptoGator, senza ukugcizelelwa kokuthi Imfundo ye-Crypto nokugcina abafundi bethu benolwazi ngomhlaba wezezimali.
Imakethe yezimali zakwamanye amazwe eyaziwa kakhulu ngokuthi Forex emakethe yindawo lapho kuthengiswa khona izimali (ukuthenga nokuthengisa). Imvamisa, lapho abantu bezungeza umhlaba, kunesidingo sokushintshanisa izimali ukuze bakwazi ukuqhuba imisebenzi yebhizinisi ezweni labo elisingethe. Le nqubo yokushintshaniswa kwemali ibizwa ngokuthengiselana kwemali yangaphandle futhi yenziwa ikakhulukazi emakethe yezimali zangaphandle.
Isici esisodwa esenza imakethe ye-forex ibukeke ukuthi ayikho imakethe emaphakathi yezimali zokuhweba. Kunalokho zidayiswa ngekhompyutha noma zenziwa ngaphezu kwe-counter (i-OTC). Abahwebi benza konke ukuthengiselana ngenethiwekhi yekhompyutha kunokushintshanisa okuphakathi.
The Forex emakethe ivulekele ukuhweba amahora angama-24 ngosuku, ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu ngezimali ezithengiswa emhlabeni wonke ezikhungweni ezinkulu zezezimali zaseLondon, eHong Kong, eSingapore, eNew York, eParis, eTokyo, eZurich, eFrankfurt, eSydney, nakuzo zonke izindawo zesikhathi.
Okushiwo ukuthi ukuphela kosuku lokuhweba e-United States ukuqala kosuku lokuhweba eHong Kong naseTokyo. Imakethe ye-forex ihlala isebenza kakhulu nganoma yisiphi isikhathi sosuku ngezilinganiso zamanani ezishintsha njalo.
Izici Ezihambisa Imakethe ye-Forex
Izigaba Zabantu Abathengisa Imakethe ye-Forex
Amagama Abalulekile Okumele Uwazi Uma Ubhekene Nemakethe Ye-Forex
Izinzuzo Zomakethe We-Forex Ngaphezu Kwamanye Izimakethe Zezezimali
Ngokwenzayo, izinto eziningi zingaba nomthelela odala ushintsho kuzintengo zemali ku FX imakethe. Uma nje lezi zinto zihlala zibalulekile ekuhambeni kwemakethe, abathengisi babheka lezi zinto lapho benza izinqumo zokuhweba.
Lezi zinto zinqamula imicimbi yezomnotho emikhulu njengokukhethwa kukamongameli omusha, noma ezinye izinto zezomnotho njengezinga lenzalo elikhona, ukungasebenzi, i-GDP, isikweletu ku-GDP ratio kanye ne-inflation, njll. Ikhalenda yezomnotho ukuhlala phezulu ezintweni eziphathelene nokukhishwa kwezomnotho okubalulekile okungahambisa imakethe.
Noma ngubani ohweba FX imakethe ngokuyisisekelo iwele ezigabeni ezimbili: i-Hedgers ne-Speculators. Ngenkathi lezi zigaba ezimbili zabathengisi zihlala zibalulekile emakethe, iqhaza labo, ukubaluleka kwabo, nenhloso yabo yokuhweba emakethe zihlala zihlukile komunye nomunye.
AmaHedger ahlala njalo efuna ukunciphisa ukunyakaza okwedlulele ngesilinganiso sokushintshisana. Lelisu lisetshenziswa izingqungquthela ezinkulu ezifana neTotal, iDangote, neAmazon ababheke ukunciphisa ukuthambekela kwabo ekuhambeni kwemali yangaphandle.
Ngasohlangothini lwe-flip, i-Speculators ifuna ubungozi futhi ihlale ifuna ukusizakala ngokuntengantenga kwamanani okushintshana enzuzo ethile ehloniphekile. Lezi zigaba zabadayisi zifaka amadeski amakhulu okuhweba emabhange amakhulu nabadayisi.
Imali eyisisekelo: Lapho ucaphuna ukubhangqa kwemali, le yimali yokuqala evela. Uma ubheka i-EUR / USD, imali eyisisekelo yi-Euro.
Imali eguquguqukayo / yesilinganiso: Le yimali yesibili embhangqwaneni wemali ocashuniwe. Endabeni ye-EUR / USD, yiDola laseMelika.
Ibhidi: Intengo yebhidi yintengo ephezulu kakhulu umthengi (umthengi) angayikhokha. Leli inani ozolibona lapho uzama ukuthengisa i-forex pair, imvamisa ngakwesobunxele sekhotheshini futhi kaningi ngokubomvu.
Buza: Lokhu ukuhlanekezela kwe-oda le-Bid futhi kukhombisa ukunikezwa okuphansi kunakho konke umthengisi akulungele ukukukhokha. Le yintengo ongayibona lapho uzama ukuthenga i-currency pair, futhi imvamisa iye kwesokudla nokuluhlaza okwesibhakabhaka.
Spread: Lokhu ngukungafani phakathi kwebhidi nentengo yokunikezwa, okungukusabalala kwangempela emakethe ye-forex engaphansi, kanye nokusabalala okwengeziwe komthengisi.
Nciphisa: Isilinganiso senza kube lula kubathengisi ukuhweba izikhundla ngokunikela kuphela iphesenti lenani eliphakeme lokuhweba. Lokhu kusiza abathengisi, ngemali encane, ukuthi basebenzise izikhundla ezinkulu. Isilinganiso sandisa inzuzo nokulahleka.
Amapayipi / Amaphesenti ePhoyinti: I-Pip ifana nokushintshwa kwamadijithi owodwa Esikhundleni se-4 samadesimali kubhangqa elicashuniwe. Yile ndlela futhi abathengisi bebhangqa lemali ababhekisa ngayo ekuhambeni. Isibonelo, namuhla, i-GBP / USD ithole amaphuzu ayi-100.
Ubungozi: Ipheya yemali ibizwa ngokuthi uketshezi kuphela uma ingathengwa futhi ithengiswe masinyane njengoba imali yombili ishintshaniswa noma ithengiswa ngabahlanganyeli abaningana.
Imajini: Leli inani lemali elidingekayo ukuvula i-akhawunti ebanjisiwe futhi ngumehluko phakathi kokulinganiswa okuphezulu kwesikhundla sakho nezimali zomthengisi obolekiswe zona.
Ucingo lwemajini: Lapho imali efakwe yonke, kanye noma isusa noma yikuphi ukuzuza noma ukulahleka, iwela ngaphansi kwenani elichaziwe (imfuneko yemikhawulo), ikholi ye-margin izobangelwa okwenza umhwebi afake imali eningi ukuxhasa isikhundla esivulekile.
Izindleko zokuthenga eziphansi: Ngokwenzayo, abathengisi be-forex benza imali yabo ekusakazeni nasezimalini zezimali ezikhokhiswa ubusuku bonke kuhwebo. Uma kuqhathaniswa nezinye izimakethe zezezimali ezifana nemakethe yezimpahla, inkokhiso yekhomishini yezentengiselwano zeFX iphansi impela ngenxa yokusabalala okuncane ngababili bemali.
Ukusakazeka okuphansi: Ngenxa yokuchithwa kwemali ephezulu ngamabhangqa amakhulu we-FX njenge-USD, i-EUR, i-JPY, ukusabalala kweBid / Ask kuncane kakhulu kulawa ma-pair. Ngokwenzayo, ukusabalala kuyisithiyo sokuqala okufanele sinqotshwe lapho imakethe ihamba ngokuthanda komthengisi. Ngemuva kokuhamba ngaphezu kokusabalala, noma yimaphi amapipi angeziwe ahamba ngokuthanda komthengisi aqoshwa njengenzuzo.
Ukuhweba Okusetshenziswayo: The Forex emakethe iyimakethe ephakeme yokuphakamisa, lokhu kusho ukuthi abadayisi bakhokha ingxenye encane kuphela yazo zonke izindleko ezidingekayo zokuxazulula ukuhweba. Lokhu kunamandla okukhulisa ukuzuza noma ukulahleka. Lokhu kuzuzisa kakhulu abathengisi abanolwazi ababheke ukwenza okuningi emakethe.
Ukuhweba Forex kungaba ngumsebenzi owesabekayo futhi osabisayo kubadayisi abasha abangakaze bavezwe indawo yokuhweba eyinkimbinkimbi, enkulu futhi engamanzi.
Kodwa-ke ngamathuluzi wokufundisa abanzi futhi aphelele, imihlahlandlela, okokufundisa, amavidiyo, neminye imithombo etholakala ku-inthanethi, futhi enikezwe ngabashintshi, abaqalayo bangahle babe sendleleni yokwenza inzuzo enkulu Ukuhweba Forex.
By I-Crypto Gator Posted on February 14, 2021
Izinsizakusebenza kanye Nemihlahlandlela 0
Ukubuyekezwa Kwe-Web Hosting: I-InterServer
Ngaphambi kokukhahlela uhambo lwakho lokwakha iwebhusayithi yobungcweti, esinye sezinqumo ezinzima kunazo zonke okufanele uzenze ukukhetha umlingani wezinsizakalo zokubamba iwebhu. Imvamisa, izinto eziningi zingaba nomthelela esinqumweni esinjalo, kepha ukunamathela kwinsizakalo yokubamba ehlangabezana kahle nezidingo zakho ezidwetshiwe kubhekwa njengokuhamba phambili.
Ukuhlelela umnikezeli we-web host ofanele ngokungangabazeki kungumsebenzi owesabekayo. Ukukhetha umhlinzeki wezinsizakalo zokubamba iwebhu olungile inqubo ebaluleke kakhulu ukufeza umuzwa ophendula kahle kakhulu kuwebhusayithi yakho.
Ukukhetha kwakho komhlinzeki wokusingathwa kwewebhu kuncike kakhulu kwizidingo zewebhusayithi, izithameli zakho ezihlosiwe, lapho zitholakala nokuthi luhlobo luni lokuqukethwe ohlela ukusingatha ukuletha izilaleli zakho. Isibonelo, uma umuntu ehlose ukushicilela ibhulogi yezindaba noma iphephabhuku eliku-inthanethi bangadinga izinsizakalo eziyinkimbinkimbi uma kuqhathaniswa nomuntu ohlela ukwethula iwebhusayithi lapho ushicilela khona amavidiyo asezingeni eliphakeme azonikezwa kuwebhusayithi yakho. Lokhu okwedlule kuletha ubunzima obengeziwe njengokusebenzisa i- Ama-Network Delivery Okuqukethwe (CDN), Izindawo Zokutholakala njll ukuhlangabezana nezidingo zakho zewebhusayithi.
Ukwenza ukukhetha kungadida kakhulu ikakhulukazi uma kuvezwa ngezindlela eziningi ongakhetha kuzo. Kulesi sibuyekezo, sizobe sinciphisa ukugxila kwethu ku I-InterServer insizakalo yokubamba iwebhu ngombono obanzi wezinye izinsizakalo ezahlukahlukene ezinikezwa yi-InterServer. Noma ngabe ubheka indinganiso Ukusingathwa kwephaneli le-C noma ukukhipha i Ipulatifomu ye-Ecommerce, sakukhava.
Ukukhetha ukubuyekeza I-InterServer kusekelwe kumiphumela yedumela abayiqongelele emashumini eminyaka adlule abekhona: ukutholakala kwabo kalula, ukuphepha, nokwethembeka kwenethiwekhi. Ake singene ukuze sithole okwengeziwe.
I-InterServer Web Hosting
Izici eziphezulu ze-InterServer
Ukwakhiwa Kwezobuchwepheshe Bezobuchwepheshe
Izizinda ezingenamkhawulo namawebhusayithi
Isivinini Esiphezulu Sokufika Ku-522 ms
Izinsizakalo ze-imeyili zamahhala
Isevisi yamakhasimende ephezulu: Ukuxhaswa Kwengxoxo Ebukhoma engu-24/7
Isikhala Sokugcina Esingenamkhawulo
Ingabe Kufanele Ucabangele I-InterServer?
I-InterServer ungomunye wabahlinzeki bokubamba iwebhu bokuqala obekukhona amashumi eminyaka manje. Kusukela ngo-1999, i-InterServer ibilokhu ihlinzeka ngezinsizakalo ezimakethe zomhlaba ezikhulayo okwenza kube yiminyaka engama-21 yokulethwa kwezinsizakalo ezisezingeni kuze kube manje. I-InterServer ikhonjwe ngokukhethekile phakathi kwabancintisana nabo ngokunikela ngesipiliyoni senkonzo eyodwa-in-one kubasebenzisi bayo. Ngaphezu kwezinsizakalo zokubamba okwabiwe ezihlinzekwa yi-InterServer, zinikeza nokusingathwa kwamafu namaseva asheshayo.
Ngokwengeziwe, banikela izinsizakalo zokuqoqa kumakhasimende angancamela ukuphatha ubunikazi bengqalasizinda yabo ebonakalayo. I-InterServer ihlinzeka ngezinhlelo ezahlukahlukene zeseva eza ne-suite ebanzi yezici ezihloselwe ukusiza ukwakhiwa nokugcinwa kwewebhusayithi ngokushesha.
Iseva yokubamba ephawulekayo yakhelwe ukwaneliseka kwamakhasimende. Izikhungo ezine zedatha zenkampani zonke zibanjelwe e-United States, ngoba abasebenzisi baseMelika abanjalo bangathola isivinini esikhulu nokwaneliseka okusobala kwensizakalo.
I-InterServer useziqongelele idumela eliqinile eminyakeni eyedlule okuhehe amaklayenti asezingeni eliphezulu, kusuka kumabhizinisi amancane kuya ezinkampanini zeFortune 500. Namuhla, i-Interserver igama lekhaya elivelayo noma nini lapho kushiwo izinsizakalo zokubamba iwebhu.
Ukuvikeleka kuzoba yinto eza kuqala kuwe uma ufisa ukuvikela lonke ulwazi olungena kuwebhusayithi yakho. Ngezigidi zamafayili amabi ku-inthanethi, ukuphepha kuyisici esibaluleke kakhulu. I-InterServer inikeza konke okudingayo ukwakha i-ironclad iwebhusayithi evikelekile, ekuhlinzekeni ngezinsizakusebenza ezidingekayo ukuze uqonde ngokugcwele izici zokuphepha zewebhusayithi, ukukunikeza amathuluzi afanele okwenza izinto ziqhubeke.
Iseva I-InterShield Security Firewall isebenzisa ukufunda komshini ukuhlinzeka ngokuphepha okuphezulu kwamakhasimende, ngakho-ke ukuvimba nokuvikela abahlaseli abanonya. Lesi sici sitholakala kuwo wonke amapulani ngokuzenzakalela.
Ukuqinisekisa umthetho olandelwayo wezokuphepha ongu-2, abasebenzisi bavezwa kumathuluzi eModSecurity ahlinzeka ngolunye ungqimba lwe- izivikelo firewall ngokuhlanganyela ne-InterSheild futhi uhlale uskena amadrayivu wokubamba amafayili asolisayo noma amabi.
Enye yezinselelo esihlangabezana nazo njalo umkhawulo wenani lezizinda namawebhusayithi angakhiwa yinsizakalo yokubamba enikeziwe. Njengoba ubhekene nale nkinga, ungahle uvinjelwe uma ubungadala enye iwebhusayithi encane kuma-subdomain noma iwebhusayithi ehlukile.
Ezimweni ezinzima kakhulu, ungahle ungabi nokufinyelela okugcwele kulwazi oludingekayo ukufaka okuqukethwe kwe-WordPress. I-InterServer ibekwe ngokukhethekile ekulethweni kwayo kwezinsizakalo njengoba zisusa lo mngcele, zinikeza abasebenzisi nge izizinda ezingenamkhawulo kumawebhusayithi. Ngalezi zici, abasebenzisi bangakwazi ukuba nawo wonke amawebhusayithi wabo kanye nama-subdomains ngaphansi kweseva eyodwa, okwenza kube lula ukwakha nokuningi ngokugcinwa.
Abasebenzisi futhi bangaba ngabanikazi futhi basebenzise inombolo enkulu yolwazi njengoba befuna. I- umphathi wesizinda kwenza kube nokwenzeka ukwengeza, ukususa, nokuphatha izizinda ezengeziwe ngokwehlukana, okwenza kube nokwenzeka ukusebenzisa amawebhusayithi azimele. Ngokwengeziwe, i-InterServer yenzelwe ukutholakala kalula, okwenza kube lula kubasebenzisi ukuthi bazulazule ngokulula kulwazi olungenankinga. Kukhona njalo ukuhlinzekwa kokuthola usizo ngabaphathi bethu abakhona abangama-24 × 7 ukudlulisa eminye imisebenzi ejwayelekile njengokuhlela izipele, ukufakwa kwe-OS, ukukhuphula izikhubekiso zenqubo-mgomo nezokuphepha.
Eduze kokuphepha, isivinini kufanele sikleliswe phezulu kakhulu phakathi kwezici okufanele uzibheke lapho ukhetha insizakalo yokubamba. Kungenzeka ukuthi uqophe ifayela le- izinga eliphezulu lokubhabha uma iwebhusayithi yakho ilayisha kancane njengoba izivakashi zizokuthola kunzima ukuzulazula ngokuqhubekayo, ngenxa yalokho bazohamba ngemuva kokuvakashela ikhasi lokuqala.
I-InterServer ikumbozile, uma kukhulunywa ngejubane lenethiwekhi! Nge- isivinini esimaphakathi sama-522 ms, I-InterServer ihlinzeka ngesivinini esiphezulu kubanikazi bewebhusayithi, inikeze lolo lwazi lokuthokoza.
I-InterServer iyakuqonda ukubaluleka kwe-intanethi esheshayo, ngakho-ke, bebelokhu bezimisele ekwenzeni ijubane leseva yabo inyanga ngayinye. Kusuka ku- idatha etholakele, ijubane lewebhusayithi njengamanje lihleli kuma-522 ms, uma kuqhathaniswa nama-494 ms aqoshwe ngoNovemba 2019 ekhombisa ubufakazi bokukhula okuqhubekayo nokwaneliseka kwamakhasimende okuphezulu.
Ukuba ne-akhawunti yangokwezifiso ye-imeyili kubaluleke njengesinyathelo senqubo yokwenza umkhiqizo nemikhiqizo yakho noma noma kukhulunywa ngokuhlanganiswa ne-CRM efanelekile yokwenza isizukulwane. Ukuthola insizakalo yokubamba enikezela ngesevisi ye-imeyili yangaphakathi kunenzuzo yokuthembela kubahlinzeki bama-imeyili abavela eceleni njengeGoogle Workspace (ngaphambili i-GSuite) yezinsizakalo ze-imeyili.
Esinye sezici ezingeziwe abasebenzisi be-InterServer abagcina bejabulela izinsizakalo ze-imeyili zamahhala. I-InterServer inikeza ama-akhawunti wamahhala wawo wonke ama-akhawunti aphethwe, okuvumela amabhizinisi ukuthi asethe i-imeyili yezinkampani eziqeqeshiwe ukusiza ukuxhumana namakhasimende asevele ekhona nalawo angaba khona.
I-InterServer iyayazisa iklayenti layo, ngakho-ke baziqhayisa ngenye yezinsizakalo ezingcono kakhulu zamakhasimende. Ukuxhumana kungumgogodla wanoma imuphi umsebenzi futhi kubalulekile kulokho, kuyasiza ekufezeni ukwaneliseka kwamakhasimende.
Ukuphendula kwamakhasimende e-InterServer kuphendula imibuzo yabasebenzisi ngaphansi kwemizuzu engu-5, ukuxazululwa kwezinkinga ngesikhathi esisheshayo. Ngaphezu kwengxoxo ebukhoma, abasebenzisi bangathola futhi usizo ngokuvakashela i-InterServers ' isisekelo solwazi noma ukufinyelela usizo lwefoni, ithikithi, ne-imeyili.
With I-InterServer, kungenzeka ungadingeki uzihluphe ngosayizi wesitoreji njengoba uhlelo ngalunye luza nesikhala sokugcina se-SSD esingenamkhawulo ukuhlangabezana nezidingo zansuku zonke online. Uzokhathazeka kancane ngokukhawulela usayizi wefayela noma inani lemininingwane ozoyithatha online. Lokhu kuyinzuzo enkulu kumawebhusayithi anamasu ahlangana futhi agcine imininingwane emikhulu noma imininingwane nsuku zonke.
Ngokuya ngerekhodi labo elithembekile lomuzwa kanye nokuhlangenwe nakho komsebenzisi, i-Interserver yaziwa ngokuqamba ukwakhiwa kwezokuphepha okuqinile okuyenza indawo ephezulu yamagama amabhizinisi amakhulu emhlabeni wonke. Izinga labo eliphakeme lamazinga okuphepha emugqeni, insizakalo yamakhasimende ephakeme, isikhombimsebenzisi esibonakalayo esisebenziseka kalula kanye nesikhathi esisheshayo sokulayisha iwebhusayithi senza kube ukhetho olukhethwayo nolufanele kuzo zonke izinhlobo zamawebhusayithi.
Ekugcineni, uzofuna ukunamathela enkampanini yokubamba iwebhu enikeza isikhala esingenamkhawulo sokugcina kanye nokuguquguquka uma kukhulunywa ngokuphatha izizinda ezingaphansi kwewebhusayithi yakho. Ikakhulukazi uma ibhizinisi noma inkampani yakho ifuna ukwanda okuqinile esikhathini esizayo esiseduze.
By I-Crypto Gator Posted on December 19, 2020
Umhlahlandlela olula wemizuzu emi-3 wokuqonda i-blockchain nama-cryptocurrensets
Izimali zemali ze-idijithali yemali
Luzuzisa Kanjani Utshalomali lwe-Crypto?
Umthombo wesithombe: I-SoFi.com
Ama-cryptocurrensets ayindlela yemali edijithali, okusho ukuthi ingeyedijithali kuphela - ayikho imali ekhokhwayo noma ibhili ekhishwayo. Ziyindlela yokushintshanisa izimpahla nezinsizakalo. Njengohlelo lwemali yontanga, cryptocurrencies awadingi abalamuli ngaphambi kokuthi adluliselwe phakathi kwabantu.
Bitcoin, i-idijithali yemali yokuqala nekhulu kunayo yonke eyenziwe yimakethe yemali yasungulwa ngemuva kwenhlekelele yezezimali ka-2008. Impahla ehloniphekile ye-crypto yenziwa ngumuntu ongaziwa noma iqembu labantu elingaphansi kwegama lomgunyathi uSatoshi Nakamoto.
Kunedlanzana lama-cryptocurrensets laphaya, okwenziwa okuningi nsuku zonke, kepha iBitcoin (BTC), i-Ethereum (ETH) neTether USD (USDT) yizi-cryptocurrensets ezi-3 eziphezulu kakhulu ezikhona. Selokhu kwavela ukugqama, izimpahla ze-crypto bebelokhu bethola intshisekelo enkulu - beheha bobabili abathengisi nabadlali bezikhungo.
Namuhla, abathengisi abaningi nezindlela zokukhokha zamukela izinkokhelo ze-crypto - kusiza izinkokhelo ezilula nezilula zezimpahla nezinsizakalo. Yize amazwe amaningi engenayo indawo ethambile yokungena crypto, i-blockchain, ubuchwepheshe obusisekelo be-cryptocurrensets buthole ukwanda kokutholwa ezizweni zonke.
Ama-cryptocurrensets avikelekile nge-cryptographic ileja ubuchwepheshe obubiziwe blockchain okwenza kube nobufakazi obuphazamisayo futhi obungaphenduki. I-Bitcoin ixazulula enye yezinkinga ezinkulu ezihambisana nemali edijithali - inkinga yokusebenzisa kabili. Ngokuphambene nohlelo lwemali lwendabuko, ama-cryptocurrensets akhishwa yinoma yimuphi umzimba ophakathi, ngakho-ke akhululekile ekulawulweni okuphakathi nasekukhohlisweni.
Ekugcineni, amelana nokuvinjelwa futhi awakwazi ukuvalwa ngoba iningi lawo liphansi.
Ama-cryptocurrensets yiwo kuthengiswa kungaba ekushintshaneni okuphakathi noma okwabelwe indawo. Ukushintshana kwe-Crypto njengamanje bangabanikeli abaphambili bokwenza ama-cryptocurrensets ngenkathi ama-exchanges aphakathi nendawo enza i-akhawunti yamaphesenti amakhulu wevolumu ephelele yama-cryptocurrensets athengiswa kuzo zonke izingxoxo.
Ukuhwebelana okuphakathi (CEX) isebenza njengemakethe yesitoko yendabuko enephuzu elilodwa lokulawula. Njengokushintshanisa okutholakala kakhulu futhi okusebenziseka kalula, ukushintshaniswa okuphakathi nendawo kunempikiswano njengoba ama-cryptocurrensets athathwa njengabekwe eceleni ngomhlangano.
Umbono we-centralization usho ukuthi umuntu wesithathu noma umuntu ophakathi uqashiwe ekwenzeni ama-cryptocurrensets asebenzayo. Abahwebi noma abasebenzisi babeka imali yabo ekunakekelweni komuntu ophakathi njengoba benza ukuthengiselana kwansuku zonke. Ekushintshaneni okuphakathi, ama-oda ayenziwa off-uchungechunge.
Ukushintshaniswa okunwebekile (Ama-DEX) ngokuhlukile aphikisana ngqo nozakwabo abaphakathi. Ukuthengiselana ku-DEX kuyenziwa ku-chain (ngenkontileka ehlakaniphile), ngamanye amagama abasebenzisi noma abathengisi abazethembi izimali zabo ezandleni zomuntu ophakathi noma owesithathu. Yonke i-oda (okwenziwayo) lishicilelwa ku-blockchain - okuyiyona ndlela esobala kakhulu yokuhweba nge-cryptocurrency.
Okuwukuphela kwento ebuyayo ekushintshaneni okwenziwe ezindaweni ezithile ukuthi kungaba yinkimbinkimbi kancane kuma-newbies angahle abe nesikhathi esinzima sokuhamba ngokushintshana. Kodwa-ke, i-DEX yesizukulwane esisha efana ne-Uniswap, Sushiwap seyenze lula le nqubo.
Bathumela ama-Automated Market Makers (AMM) ukufaka esikhundleni somqondo wama-Order Books. Kumqondo wemodeli ye-AMM, azikho abenzi noma abathathi, abasebenzisi kuphela abenza ukuhweba. Njengoba sekushiwo, ama-DEX asuselwa ku-AMM asebenziseka kalula. Zisetshenziswa kahle futhi zihlanganiswe kakhulu kuzikhwama ezinjenge Trust Wallet, I-MetaMask futhi ImToken.
Ama-cryptocurrensets amaningi afana neBitcoin amaminerali. Ukumayini kuyinqubo okwenziwa ngayo ukuthengiselana okusha kwe-cryptocurrency futhi amabhlogo amasha afakwa ku-blockchain. Abavukuzi bathola izikhuthazo zokuqinisekisa ukuthengiselana noma ukufaka amabhlogo amasha ku-blockchain. Lokhu inqubo yokuncintisana, amathuba okumba ibhulokhi kuncike kakhulu ku- amandla e-hashing kwikhompyutha yomvukuzi.
Kwenethiwekhi yeBitcoin, umvuzo we-block njengamanje ama-bitcoins ayi-6.25. Ngebhulokhi ngalinye elimbiwe, umvukuzi owengeze ibhulokhi uzothola ama-bitcoins angu-6.25. Imivuzo iyaqhubeka nokuhhafu njalo eminyakeni emine emcimbini omkhulu obizwa I-Bitcoin Halving. Isigamu sokugcina senzeke ngoMeyi 11, 2020, kunciphisa umvuzo kusuka kuma-bitcoins ayi-12.5 kuya kuma-bitcoins ayi-6.25.
Ngaphezu kwemivuzo yezimayini etholakele, abavukuzi baphinde bathole imali ekhokhwayo yokuthengiselana ekhokhwa abasebenzisi ngenkathi bethumela, bethengisa ama-cryptocurrensets. Imali enjalo ingahle isuke kumasenti ambalwa iye kumadola ambalwa.
Amakhomphyutha wezimayini athatha ukuthengiselana echibini lokuthengiselana okulindile, bese eqhuba isheke ukuqinisekisa ukuthi umsebenzisi unemali eyanele yokuqedela ukuthengiselana kanye nesheke lesibili ukuqinisekisa ukuthi ukuthengiselana bekugunyazwe ngokufanele.
Uma kwenzeka umsebenzisi onjalo engenazo izimali ezanele zokukhokhela izindleko zokwenziwayo, umsebenzi ungabuyela emuva kubasebenzisi njengokuthengiselana okuhlulekile. Abavukuzi banamathuba amaningi okuthi bathathe ukuthengiselana ngezimali ezinkulu zokuthengiselana. Kungakho-ke kujwayele ukuthathwa kanjalo 'lapho kukhulu imali ekhokhwayo, kushesha ukwenziwa kokuthengiselana'.
Abasebenzisi be-Cryptocurrency banenketho yokukhetha phakathi kwe-inthanethi, okungaxhunyiwe ku-inthanethi noma izikhwama zehadiwe. Kuncike ekukhetheni okwenzayo ukuxazulula isikhwama semali esinezici eziphephe kakhulu kulungile. Yize izikhwama ezingaxhunyiwe ku-inthanethi neziku-inthanethi zikhombisile ukuthi zivikelekile, izikhwama zehadiwe ziyaziwa ukuthi zinikeza ukuphepha okuphezulu kakhulu kwempahla yakho yedijithali.
Ama-wallet aku-inthanethi ngokuvamile akhululekile, asebenziseka kalula futhi atholakala kalula futhi ngenxa yalokho, yizikhwama ezisetshenziswa kakhulu embonini ye-crypto. Ngasikhathi sinye, yibona abasengozini enkulu phakathi kwezinhlobo ezahlukahlukene zezikhwama ze-crypto. Eduze kwe- isikhwama semali, isikhwama esingaxhunyiwe ku-inthanethi sinikeza ukuphepha okungcono kakhulu kwempahla yakho ye-crypto.
Uma usebenzisa isikhwama se-cryptocurrency okokuqala ngqa, ukunamathela esikhwameni esivikelekile kodwa esisebenziseka kalula kufanele kube yinhloso yakho yokuqala. Ngokuvikeleka okuphezulu, ama-Hardware Wallets anjenge ULedger Nano X Kunconywa ngochwepheshe.
Yenza isipele izikhwama ze-crypto inqubo ebalulekile ekuphathweni kwezimpahla ze-crypto eziphephile. Uma kwenzeka ulahlekelwa yizikhwama zemali, izimali zingabuyiselwa kalula esikhwameni esisha kusetshenziswa okhiye abayimfihlo noma amagama wokungena atholakala emuva.
Ama-cryptocurrensets athathwa njengezimpahla ezinokuguquguquka okukhulu, futhi ngenxa yalokho angaphansi kokushintshashintsha kwamanani amakhulu. Ngokombono, ukutshalwa kwezimali okunobungozi obukhulu kusho imivuzo ephezulu, lokhu kuyiqiniso nakuma-cryptocurrensets. Uma kungenzeka kube nokubi, ukulahleka okutholakele kungaba kubi kakhulu. Kungakho abeluleki bezokutshalwa kwezimali beshumayeza 'Ungalokothi utshale imali ongazimisele ukulahlekelwa yiyo nganoma yisiphi isikhathi esithile.'
Amathuba wokukhuphuka awapheli, iBitcoin ibithengisa cishe amaRandi ayi-1000 ekuqaleni kukaSepthemba ngo-2020 futhi namuhla ihweba ngaphezu kuka- $ 19k. Ngama-cryptocurrensets angaphezu kuka-6000 laphaya, kudinga ukuhlaziywa okuningi ukukhetha uhlamvu lwemali oluhle noma ithokheni elinamandla aphezulu aphezulu. Kodwa-ke, amathuba okuthola inzuzo emakethe yezinkunzi ahlala ephezulu ngoba, njengoba i-aphorism ethandwayo ihamba, "Igagasi elikhulayo liphakamisa zonke izikebhe".
By I-Crypto Gator Posted on December 13, 2020
Amaphuzu avelele wezindaba zeCrypto neBlockchain: Isonto likaDisemba 10th 2020
Amaphuzu avelele we-Crypto: I-MicroStr Strategy ithenga i-bitcoin ethe xaxa, i-India ukuze izuze intela ye-crypto, uDow Jones ukwethula izinkomba ze-crypto, i-ETH Fund ukuze iqale ukubhidliza amasheya eToronto, uGenesise Block uthola i-OMG: kukhona okuningi kuma-Crypto Highlights kuleli sonto.
Izihloko Eziphezulu Ze-Crypto Ngu-Crypto Gator
Izindaba Eziphezulu Zeviki
Amamethrikhi amathathu abalulekile ongawabuka njengoba intengo yeBitcoin izama ukufaka ama- $ 3 aphezulu
Izinhlelo ZaseNdiya Zenzuzo Yentela Evela Kuzimali ZaseBitcoin: Umbiko
IMicroStr Strategy Ithenga ama- $ 50M engeziwe ku-Bitcoin
Imizwa Yemakethe yaleli Sonto
Izinkomba ze-S & P Dow Jones Zokuqalisa Izinkomba ze-Crypto ngo-2021
Isikhwama se-Ethereum sokuqala kuToronto Stock Exchange
I-Hong Kong OTC firm firm ithola i-OMG Network
Amaphuzu avelele we-Crypto: IMicroStr Strategy ithenga i-bitcoin ethe xaxa, i-India izuza intela ye-crypto, u-Dow Jones wethula izinkomba ze-crypto, i-ETH Fund ukuze iqale ukubhidliza amasheya eToronto, uGenesis Block uthola i-OMG: kuningi kuma-Crypto Highlights aleli sonto.
Lapha eCrypto Gator; Imfundo ye-Crypto futhi imicimbi ephezulu embonini ihlale iyingxenye yezinto eziseqhulwini esizibeke eqhulwini ukugcina abafundi bethu benolwazi futhi bebajabulisa. Izindaba eziningi ezithakazelisayo kuma-Crypto Highlights kuleli sonto.
Izihloko Eziphezulu Ze-Crypto Ngu I-Crypto Gator
Njengoba iBitcoin iqhubeka nokuhamba uzungeze umaki we-19k, kunamamethrikhi amathathu asemqoka wokuqapha ukuqhuma noma ukonakala okungenzeka.
Abaphethe ngentando yeningi abathathu baphakamise umthethosivivinywa ozodinga ukuthi abanikezeli be-solidcoin babhalise kwiFederal Reserve futhi bathole nelayisense yokubhanga.
Umphathi wokutshalwa kwezimali kwidijithali waseCanada uzokwethula i-IPO kuleli sonto ukukhipha i-Ether Fund, okuyi-Ethereum trust-traded trust kuToronto Stock Exchange (TSX).
Umthombo wesithombe: I-AXX Academy
Amamethrikhi amathathu abalulekile ongawabuka njengoba intengo yeBitcoin izama ukufaka ama- $ 3 aphezulu0
Njengoba imihlangano yeBitcoin isondela kufinyelela kumaki wama- $ 20k, abathengisi babheke ikhefu elingaba khona ngenhla kwendawo engama- $ 19k noma ukuwa. Isifunda sama-20k ebesisebenza njengesihamba phambili kumqhudelwano wangaphambilini wango-2017 wezinkunzi manje sesisebenza njengendawo esemqoka engazweli emqondweni enama-oda amaningi okuthengisa ahlangana ndawonye esifundeni.
Abahwebi kuzodingeka babheke izinto ezibalulekile ukunquma ukuthambekela okulandelayo okungenzeka. Okuphezulu kwezinto okufanele uzibheke ekugcineni kuzogxila kokuzungezile: ivolumu yokuhweba, isilinganiso eside nesifushane, nokukhuphuka kwesilinganiso sezimali. Lapho abathengisi (izikhindi) befuna ukuphakanyiswa okuphezulu, izinga lokuxhaswa kwemali liba libi. Ngenxa yalokhu, labo bahwebi bazobe bekhokha imali ekhokhwayo. Kungumkhuba omuhle ukucabanga ukuthi inani eliphakeme kakhulu lemali lingasho ukuthi abadayisi babheja emakethe yezwe.
Abathengisi abaningi balandelela ivolumu yonkana ukushintshana kwamabala, ivolumu ephansi ngokujwayelekile izokhombisa ukungabi nentshisekelo noma ukuzethemba emakethe. Kuyadingeka ukuthi uqaphele iBitcoin ephula ukumelana okubalulekile ngevolumu ephansi. Inzalo enempilo kufanele ihambisane nevolumu ehloniphekile.
Abahwebi baphinde babheke isilinganiso "eside-esifushane" ekushintshaneni okuholayo. Lesi silinganiso singahamba ibanga elide ukunquma ukuqondiswa kwemakethe abathengisi ababheja kuyo.
Izinhlelo ZaseNdiya Zenzuzo Yentela Evela Kuzitshalo zeBitcoin: I-Report
Ngokuthuthuka kwakamuva, abatshalizimali be-Indian crypto noma abathengisi kuzofanele baqale ukukhokha intela kunzuzo ekhishwe ekubanjweni kwabo kwe-crypto. Ngokuvumelana ne I-Economic Times (ET), i-India kubikwa ukuthi iqapha futhi ilandelela abatshalizimali be-crypto abathole izinzuzo ezivela e-rally yakamuva ye-bitcoin, isinyathelo esibhekiswe ekufinyeleleni izintela ezivela kuleyo mbuyiselo.
Lo mbiko usola ukuthi ngaphambi kokuvinjelwa kwe-crypto yiReserve Bank ngo-Ephreli 2018, umnyango wezentela waseNdiya walanda imininingwane mayelana nokuhweba kwe-bitcoin okwenziwa ngemigudu yasebhange ngaleso sikhathi. Yize lokhu kuvinjelwa kwasuswa ngesinye isikhathi ngo-Ephreli 2018.
Lo mbiko uqhubeka nokusho ukuthi iziphathimandla nazo ziqapha ukuzuza okutholwe ngabatshalizimali be-crypto besebenzisa ukushintshana okuhambisana ne-KYC / AML njengeCoinDCX futhi kusetshenziswa nekhadi le-PAN, umazisi kazwelonke.
Yize kunjalo, iphesenti elikhokhiswa intela alikadalulwa okwamanje iningi lochwepheshe lifaka intela engaba khona engama-30% kuzinzuzo ze-crypto. Iningi labatshalizimali belulekwa ukuthi lifayishe izinzuzo zabo ze-crypto njengezinzuzo ezinkulu ezihambisana namasheya. Embikweni wephephandaba, u-Amit Maheshwari ukuphawule lokho Ukuhweba okusebenzayo kweBitcoin kungenzeka iphathwe njengebhizinisi eliqagelayo futhi ngenxa yalokho lizoba ngaphansi kwamanani entela ajwayelekile.
IMicroStr Strategy Ithenga ama- $ 50M angeziwe eBitcoin
IMicroStr Strategy kaMichael Saylor isalokhu imnandi kwiBitcoin njengoba inkampani yezobunhloli yaseMelika idonsela amanye amaRandi ayizigidi ezingama-50 kwimpahla yedijithali. Njengoba kuqinisekisiwe ku-Twitter eyenziwe yi-CEO, ifemu ithenge cishe ama-bitcoins angama-2,574 ngamadola ayizigidi ezingama- $ 50.0 ngokokuya kwenqubomgomo yayo ye-Treasury Reserve, ngentengo elinganiselwa ku- $ 19,427 nge-bitcoin ngayinye.
Ukulandela lesi sinyathelo sakamuva, i-firm manje inama-bitcoins angama-40,824 esewonke. IMicroStr Strategy yaqala yathenga iBitcoin ebiza u- $ 250 million ngo-Agasti 11, yalandelwa ukuthengwa okungeziwe kwezigidi ezingama- $ 175 ngenyanga kamuva. Lokhu kuthenga wabulawa ngokuhwebelana okuholayo okusekelwe e-US okuyi-Coinbase.
Kusukela kumenyezelwa isinqumo sokuthenga amanye ama-bitcoins ngasekupheleni kukaJulayi nonyaka, isitokwe esiqinile (i-NASDAQ: MSTR) sesinyuke ngaphezu kuka-170%. Iningi labantu manje selikhetha ukubiza inkampani i-de-facto isikhwama esidayiswa ngokushintshaniswa.
Umthetho Omusha Osahlongozwayo WaseMelika Uzokukwenza Kungabi Semthethweni Ukukhipha Ama-Stablecoins Ngaphandle Kombuso Reserve Ukuvunyelwa
Isanda kuhlongozwa umthethosivivinywa wethulwe ngabameli abathathu baseMelika babhekise kubanikezeli be-solidcoin, umthethosivivinywa ubekwe ukuze unikeze abanikeli abazimele be-solidcoin ukuthola i-charter noma ilayisense yasebhange futhi bathole nokuvunywa yi-Federal Reserve ngaphambi kokuthi bakwazi ukukhipha ama-solidcoins.
Lo mthethosivivinywa wethulwe ngabameli abathathu beDemocratic Alliance: uRashida Tlaib, ngokuxhaswa nguReps.Jesús García noStephen Lynch. Intuthuko izodinga ukuthi noma yibaphi abanikezeli be-solidcoin kufanele banikezwe umshwalense we-FDIC noma "kungenjalo balondoloze izinqolobane e-Federal Reserve ukuqinisekisa ukuthi zonke izinhlamvu zemali zingaguqulwa zibe amadola ase-United States, uma zifunwa."
Isitembu salomthethosivivinywa sibe ngumthetho sizodinga ukuthi abanikezeli bezimali bezimali abazimele babe ngaphansi kweso elibukhali leFederal Reserve. Lokho kuyingxenye ngoba “ichaza ngokungananazi izinhlamvu zemali ezinzile njengezidiphozithi ngaphansi komthetho wesifundazwe,” uRohan Grey tweeted.
Ama-Stablecoins angama-crypto-assets asekelwa yimali ye-fiat noma ubhasikidi wezinye izimali. Izimpahla ezinjalo zingasekelwa amadola aseMelika, i-Euro, noma enye imali edumile. Ama-Stablecoins ayingxenye ebalulekile yomkhakha we-crypto njengoba ethambekele kakhulu ekuguquguqukeni okuhambisana nezinye izimpahla ze-crypto.
Imikhiqizo yezezimali ze-Crypto iqhubekile nokwenza amagagasi kulo nyaka ngamadeski aphezulu wokuhweba wendabuko kanye namafemu aqala izinsizakalo ezenzelwe i-crypto. Ekuthuthukisweni kwakamuva, inkampani enkulu yedatha yezezimali iS & P Dow Jones Indices isendleleni yokwethula izinkomba ze-crypto ngo-2021. isimemezelo eyenziwe yinkampani, basemkhondweni wokwethula insizakalo yokwenza ngezifiso i-cryptocurrency ngokubambisana nomhlinzeki wedatha ye-crypto uLukka ngo-2021.
"Besilokhu sibheke indawo yempahla edijithali futhi sinomuzwa wokuthi sekuyisikhathi sokuthakazelelwa kwesikhungo ekuvuthweni, lapho izinkampani ezinjengezethu zifuna ukungena zinikele ekubonakaleni kwezimakethe," kuphawula uPeter Roffman, inhloko yezobuchwepheshe emhlabeni jikelele. necebo kuma-S & P Dow Jones Indices.
Izinkomba ze-Crypto azizintsha ngokuphelele. Kusukela ngo-2018, I-Bloomberg Galaxy Crypto Index beyaziwa ngokunikeza izingcaphuno ezimpahleni ze-crypto ezinamanzi amaningi. I-stock exchange yaseNasdaq nayo ibhale uhlu lwama-indices we-crypto esikhathini esedlule.
Lesi sinyathelo sikhombisa ukungena okukhulu kwe-S & P enkombeni ye-crypto. Uma ucabanga ngezinyathelo inkampani eyazithatha esikhathini esedlule ekuqashweni konjiniyela be-blockchain, kungaba ngokwabo ukwenza inzuzo enkulu endaweni ye-blockchain ne-cryptocurrency. Lesi sikhala singakulungela ukuncintisana okukhulu okugcina kukuhle kakhulu embonini.
Isikhwama se-Ethereum sokuqala ku-Toronto Stock Exchingelosi
Ukwamukelwa kwemikhiqizo ekhishwe ngu-Ethereum kuyaqhubeka nokushisa. Ekuthuthukisweni kwakamuva kakhulu, umphathi wokutshalwa kwezimpahla kwidijithali waseCanada uzokwethula i-IPO kuleli sonto ukukhipha i-Ether Fund, i-Ethereum trust-traded trust kuToronto Stock Exchange (TSX). Isikhwama se-ETH sizofakwa kuhlu ngaphansi kwe-Qick.U. Lokhu kuthuthukiswa kwaqala ukukhulelwa nguVitalik Buterin e-Ontario.
I-debut izofaka umnikelo ophakeme wama- $ 100 wezigidi ozovulwa kuze kube nguDisemba 12, 2020. Inkampani ekhipha i-3iQ inama-dollar angaphezu kwezigidi ezingama- $ 400 ekuphathweni kwempahla, inkampani egxile ekukhipheni imikhiqizo ehlobene neBitcoin, i-Ethereum, neLitecoin.
Akungabazeki ukuthi le ndlela yokutshala imali ingenye yezindlela ezithandwa kakhulu zokutshala imali zabahwebi nabatshalizimali abangahle bangafuni ukuyeka izinketho zabo zokuphepha kanye nokugcinwa kwe-cryptocurrency.
Ezinyangeni ezedlule kube nomugqa wohlu lweminikelo emisha esikhwameni ngaphandle nangaphandle kwemboni. Ngesinye isikhathi ngoNovemba, kubikwa ukuthi isigebenga segolide uVanEck yaqala a Umkhiqizo wenothi we-Bitcoin oshintshaniswa eJalimane. Lokhu nakanjani kusetha ithoni yokuthi abadlali abaningi bajoyine indawo.
IHong Kong OTC femu yokuhweba ithola i-OMG Netwi-ork
I-OMG isendleleni yezinguquko eziningi njengoba inkampani yokuhweba ese-Hong Kong ese-OTC uGenesis Block ithola iphrojekthi edumile. I-OMG yisixazululo sokukala esingagcinwanga, esingqimba-2 esakhelwe i-Ethereum blockchain. Lokhu kutholwa kwaba kwaziwe ngoDisemba 3. IGenesis Block Ventures yaphawula ukuthi bazimisele ukusebenzisana ne-OMG ukwakha "amapulatifomu okubolekisa nokuhweba" esikhaleni seDeFi.
Lokhu kutholwa ekugcineni kuzovumela inkampani ukuthi ikwazi ukusebenzisa ukuxhumana kwayo embonini yase-Asia blockchain ukusheshisa intuthuko ngaphakathi kwe-OMG Network, ifinyelele kubambiswano olusebenzayo oluzosiza imvelo. Ngokusho kukaGenesise Block, babambe iqhaza elikhulu esikhaleni seDeFi kulo nyaka, bakha ubudlelwano obubalulekile ne-FTX neBinance.
Uma kwenzeka ungazi, IGenesise block yaqala ngonyaka we-2017 njengeplatifomu yokuhweba esekwe eHong Kong, yethula ama-ATM we-cryptocurrency kanye nezinsimbi zezimayini. Ku-flip, i-OMG ekuqaleni yaziwa ngokuthi yi-Omisego kodwa yabuye yabuye yaqanjwa kabusha ngoJuni 2020. Le phrojekthi iphrojekthi eyaziwayo ye-cryptocurrency eyasungulwa ngo-2017.
Njengesikhulumi sesendlalelo sesibili, i-OMG isebenzisa ukudluliswa kwamathokheni angama-4,000 ngomzuzwana, inethiwekhi eshesha ngokumangazayo uma iqhathaniswa nenethiwekhi ye-ETH. Lokhu kutholwa kungabeka ithoni ngokuhamba okuthile okukhulu ngaphakathi kwesistimu ye-OMG.
By I-Crypto Gator Posted on December 10, 2020
Amaphuzu avelele wezindaba zeCrypto neBlockchain: Isonto likaDisemba 3, 2020
Amaphuzu avelele we-Crypto neBlockchain: Amabhuloho emakethe e-Bitcoin i-ATH, i-ETH 2.0 idethi yokuqalisa iqinisekisiwe, i-XRP inyuka iye ekuphakameni kweminyaka emi-2, i-PayPal iya phambili kwi-Bitcoin, S. Korea ishukumisela ukuvimbela izinhlamvu zemali zobumfihlo; Kukhona okuningi kulokhu okuvelele kwe-Crypto kuleli sonto.
Izindaba Eziphezulu Kuyo Yonke Imboni
U-Ethereum 2.0 uqinisekisile ukwethulwa kukaDisemba 1 amahora ambalwa ngaphambi kosuku lokugcina
ISingapore ihlola i-CBDC eshibhile, kusho abaphathi bendawo
Izinhlamvu Zobumfihlo Zokuvinjelwa ENingizimu Korea Ukushintshaniswa Kwe-Crypto Ngonyaka Olandelayo
Ukusebenzisana ku-DeFi Kuzuza Ukudonsa Okusheshayo
Ukugoqwa Kwemakethe Kuleli Sonto
Isikhwama semakethe seBitcoin sishaya phezulu sonke isikhathi futhi sidlula iJPMorgan ngo- $ 352B
I-Paypal Ithengwe ngama-70% wawo wonke ama-Bitcoin asanda kugaywa ngenyanga edlule njengamaRocket Demand
Ukukhuphuka kwentengo ye-XRP kuya ku-2-Year High njengoba i-Airdrop Frenzy Yakha
Izithombe ezinhle kakhulu ze-Crypto neBlockchain: I-Bitcoin cap cap bridges ATH, i-ETH 2.0 idethi yokuqalisa iqinisekisiwe, i-XRP inyuka iye ekuphakameni kweminyaka emi-2, i-PayPal iya phambili ku-Bitcoin, S. Korea ishukumisela ukuvimbela izinhlamvu zemali zobumfihlo; Kukhona okuningi kulokhu okuvelele kwe-Crypto kuleli sonto.
Izihloko Eziphezulu Ze-Crypto Ngu Ukukhalakuya eGator
Ukulandela ukuthambekela kwe-bullish kanye ne-Spark airdrop ehlongozwayo yabanikazi be-XRP, i-XRP ihlanganyele ukuze ifike ku- $ 0.79, isethe ukuphakama okusha kweminyaka emibili.
Ngaphandle kokuqala kancane kwediphozithi yabasebenzisi ekhelini lenkontileka le-ETH 2.0, umnqamulajuqu wahlangatshezwa ngesikhathi esifanele, okuqinisekisa ukuthi kungenzeka ukuthi ukuvinjelwa kwegenesis ngoDisemba 1.
I-PayApp ne-Square's CashApp kuthiwa bathenga ngaphezu kwe-100% yeBitcoin esanda kwenziwa.
U-Ethereum 2.0 ukuqinisekisile ukuqaliswa kukaDisemba 1 kusasele amahora ambalwa ngaphambi kosuku lokufamina
Ukulinda ekugcineni kuphelile! Ngemuva kweminyaka engu-5 yokusebenza kanzima ku-ETH 2.0, ubufakazi benethiwekhi (POS) yenethiwekhi buqinisekisiwe ukuthi buzoqala ngoDisemba 1. Inkontileka yediphozithi ye-Ethereum ihlangabezane nenqubo yayo yokubeka idiphozi amahora ayisishiyagalolunye kuphela kuze kube umnqamulajuqu, cishe i-524,288 Ether efakwe ngabaqinisekisi abangu-16,384 esivumelwaneni, ikhulisa ithemba lokuthi ibhulokhi ye-Ethereum izokwenzeka ngoDisemba 1.
Ngaphandle kwenzalo ephansi obekuqala ukuhambisana nokubamba iqhaza kwezibalo, ukudluliselwa kwinkontileka yediphozi kuvuselele amahora ambalwa kuphela kuze kube yisikhathi esinqunyiwe. Lokhu kuletha i-ecosystem ekuqaleni okusha sha kwenye inkathi, ihambisa inethiwekhi ye-ETH kusuka ebufakazini bomsebenzi (PoW) kubufakazi besigxobo (PoS).
Njengoba sekuvele kwaziwa, ababambiqhaza be-genesis ngeke bakwazi ukuhoxisa i-ETH yabo ebekiwe kuze kube yilapho i-ETH 2.0 iqalisa eSigabeni 1.5; ukuthuthuka kuhloswe ukuhlanganisa i-Etnetum mainnet ne-ETH2's Beacon Chain nemvelo ebunjiwe.
Futhi, abaphathi abaningi be-ETH bangabo silindele kubantu besithathu ukwethula izinsizakalo ze-staking ezinikwe amandla okuhoxa, ngaphandle kokubheka ukuthi kungenzeka kube nomkhonyovu wokuphuma.
ISingapore ihlola ukuthi ngubanikusengaphambili i-CBDC, kusho umphathi wendawo
Ngemuva kweBitcoin ne-Ethereum 2.0, iphrojekthi ekhulunywa kakhulu kakhulu ngephrojekthi ye-CBDC ephakanyiswe yiCentral Bank yamazwe amaningi. Njengoba iChina isivele ihlola i-Yuan yedijithali, iSingapore manje isihlola amathuba emali esezingeni eliphakeme iCentral Bank Digital Currency (CBDC).
Umlawuli wezezimali kanye nesikhulu esiphezulu seFintech ebhange eliphakathi laseSingapore uSopnendu Mohanty kubikwa ukuthi utshele uCointelegraph ukuthi iSingapore ihlola i-wholesale Central Bank Digital Currency noma i-CBDC. UMohanty ukuqinisekisile ukuthi kunesidingo esincane se-CBDC yokuthengisa, ingqalasizinda yohlelo lokukhokha eSingapore isivele yakhelwe ukukhuthaza izinsizakalo zokukhokha ezisheshayo nezishibhile kubantu bakuleli.
Ngakho-ke, iSingapore igxile kakhulu ekwakheni i-CBDC eshibhile kunokuba i-CBDC yokuthengisa, ezoba wusizo ekwenzeni lula ukukhokhelwa kwezokuphepha nezinkokhelo phakathi kwezikhungo zezezimali.
“Angicabangi ukuthi sidinga ukwenza olunye uvivinyo kuma-CBDC amaningi,” kusho uMohanty. "Manje, kufanele siqale ukucabanga ngokuqala ukukhiqiza."
Ephawula ngohlaka olukhona lokulawula eSingapore, uMohanty uphinde wathi izwe linohlaka olucacile lokulawula olukhona vele olwenza kube indawo engcono kakhulu kunoma ngubani ohlose ukwethula ibhizinisi elisemthethweni le-cryptocurrency.
Izinhlamvu Zobumfihlo Zokuvinjelwa ENingizimu Korea Ukushintshaniswa Kwe-Crypto Ngokulandelayoar
Amehlo abalawuli abhekiswe ezinhlamvwini zobumfihlo njengoba zingafinyeleleki kakhulu futhi ngenxa yalokho kube yindlela ekhethwayo yokusebenzelana okusolwa ngokungemthetho. Ukuncika ekuqaleni isaziso ekuqaleni kukaNovemba, iThe Financial Service Commission eSouth Korea ikubeke kwacaca ukuthi ngeke babekezelele noma yikuphi ukusebenzisana okubandakanya noma yiziphi izimpahla zedijithali ezisiza ukuwashwa kwemali.
Lokhu kubuyekezwa kukhishwe njengengxenye ebalulekile yezinqubo ezikhona ezilawula isenzo sokukhokha esikhethekile eSouth Korea. Lo mthethonqubo kuhloswe ngawo ukucindezela phansi imisebenzi yezinhlamvu eziyimfihlo esifundeni. “Uhlamvu lwemali olumnyama” njengoba kwakuthiwa ibizwa kanjalo lwagqanyiswa ngokukhethekile emibhalweni yokulawula eyakhishwa.
Iqembu liveze ukuthi ukuthengiselana okuvela kuzimpahla ezinjalo zedijithali bekungafinyeleleki futhi ngenxa yalokho kunzima kakhulu ukulandelela imisebenzi engekho emthethweni eyenziwa kusetshenziswa izimpahla ezinjalo. Imiphumela yalomthethonqubo ingaba nemiphumela emibi ekusetshenzisweni kwemali yobumfihlo efana neMonero, iDash, iZcash, njll.
Lo mthetho kulindeleke ukuthi usebenze ngoMashi 2021. Kodwa-ke, ngesinye isikhathi ngoSepthemba, ukuhola kokushintshaniswa okuphuma ku-OKEx kuyekile ukuxhasa izimpahla zokuhweba zeZcash neDash kungxenyekazi yayo ukuze kuhanjiswane nemihlahlandlela esivele iphakanyisiwe ebekwe yithimba labasebenzi.
Ukusebenzisana ku-DeFi Kuzuza i-Rapid Traction
Izimali ezihlukanisiwe (i-DeFi) ithole ukubambeka okuningi nentshisekelo ezinsukwini ezedlule njengenani eliphelele elikhiyiwe (TVL) kuzo zonke izivumelwano ezinkulu muva nje ufike ngesikhathi esiphakeme njalo zamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-14.4. Ngenkathi u-Ethereum ephethe inani elikhulu kunawo wonke, amanye ama-blockchains akhuphukela kulo mcimbi ngokusebenzisana enkabeni yalolu shintsho lweparadigm.
Ukusebenzisana kuyisici esibalulekile semvelo, kubhekwa ukuthi inkulu kangakanani i- Defi i-landscape ingahle ibe, kunokungabaza konke ukuthi i-Ethereum ngeke ikwazi ukuthola inani elikhulu kangaka. Okokuqala, besisonge i-Bitcoin (WBTC), manje amanye ama-blockchains asevele ethula ithokheni ehlanganisiwe yokubamba inani elivela emkhakheni okhulayo.
Ama-blockchains afana ne-Wave, i-NEM ayithathile le ndlela ukusungula ukusebenzelana kwemvelo ngaphakathi kwenethiwekhi ye-Ethereum ngenkathi i-Equilibrium yakhela phezu kwePolkadot. Lokhu ekugcineni kuzokwenza abasebenzisi bakwazi ukufaka uphawu lwethokheni labo lendabuko ngohlobo oluhlanganisiwe lwefa lomdabu.
Isikhwama semakethe seBitcoin sishaya phezulu ngaso sonke isikhathi angidlula iJPMorgan ku- $ 352B
Ukulandela i-rally yamanje ye-Bitcoin, impahla yedijithali iphumelele i-JPMorgan ngokwenhlokodolobha yemakethe njengoba ifike endaweni entsha ngokuphelele. Amaviki amuva nje abe nomcimbi weBitcoin njengoba iqhubeka nokugijimisa kwayo okwephula ukumelana okukhulu kalula njengoba ihlangana ngentengo entsha ngaso sonke isikhathi.
Nakuba Bitcoin isazoba nentengo entsha ngaso sonke isikhathi, impahla enhle isivele yephule imali yayo yangaphambilini yezimakethe ezinkulu, yeqa uphawu lwama- $ 352 billion manje ehweba ngaphezu kuka- $ 19k nge-bitcoin ngayinye ngoNovemba 25.
Ukuthembela idatha etholakele kusuka kwaMacro Trends, Isamba semakethe yebhange elikhulu laseMelika iJPMorgan sivalwe ngo- $ 349 billion ngoNovemba 23 ngenkathi ingqikithi yemakethe yeBitcoin ihlangana nebanga lama- $ 352 billion.
Khumbula ukuthi uJamie Dimon CEO weJPMorgan ube ngumgxeki omkhulu weBitcoin, ukushaya impahla yedijithali 'ukukhwabanisa' emuva ku-2017, okuholele ekutheni iBitcoin iphonse kanzima, iqophe ukulahleka okukhulu kwamadijithi amabili. Yize imizwa yakhe yomphakathi ngeBitcoin ingakashintshi kangako, kunemibiko yokuthi uJPMorgan ungumnikazi wesitaki esikhulu seBitcoin ngemuva kokuthi kubikwa ukuthi bethule iJPMcoin.
Ngaphandle kwalokhu kugxekwa, uJPMorgan kuthiwa utshelwe abatshalizimali bakhe ukuthi "ukubhekelwa phambili kwesikhathi eside kweBitcoin kuyabonakala," kusikisela ukuthi impahla yedijithali ingalungiselelwa ukwenyuka okuningi.
I-Paypal Ithengwe ngama-70% wayo yonke i-Bitcoin esanda kugaywa ngenyanga edlule njenge-Demand Rockets
Ukungena kukaPayPal ku-cryptocurrency okwamukelwa yi-rally enkulu kube yinganekwane, ukusho okuncane. Indaba yakamuva inakho ukuthi i-PayPal iyi kubikwa ukuthenga cishe I-70% yayo yonke i-Bitcoin esanda kummbiwa selokhu i-giant yokukhokha yethule insizakalo ye-cryptocurrency. Ngombono obanzi, iCashApp ka-Square ne-PayPal zithenge ngaphezu kuka-100% wayo yonke i-Bitcoin esanda kwenziwa.
Kusukela kumenyezelwa ngo-Okthoba ukuthi abasebenzisi be-PayPal abayizigidi ezingama-300 bazokwazi ukuthenga ama-cryptocurrensets, intengo yeBitcoin iye yahlangana, yeqa u- $ 12k ngaleso sikhathi. Idatha iyaveza ukuthi i-rally yakamuva ye-Bitcoin iqhutshwa abathengi bezikhungo. Cishe amafemu angama-21 afaka iGalaxy Digital Holdings neMicrostrategy Inc, aqongelele amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-14.42 zeBTC endaweni yawo. Lokhu kubanga ngaphezu kwe-4% yokunikezwa okusakazwa yiBitcoin.
Amaphesenti amakhulu ama-oda amakhulu wokuthenga enziwe emasontweni ambalwa edlule, kuphakamisa intengo yempahla yedijithali ephakeme. Ukutholakala okulinganiselwe kweBitcoin, kuhambisana nohafu osanda kwehliswa kwezinga lokukhishwa kweBitcoin kube nomthelela omkhulu emhlanganweni wamanani entengo phakathi kwesidingo esandayo esivela kubatshali bezimali nabezitolo.
I-XRP Intengo ikhuphukela ku-2-Year High njenge-Airdrop Frenzy Builds
Njengoba i-XRP ihlangana unyaka omusha ophakeme, i-Spark airdrop ingaba yingxenye yokugqugquzela lokhu kusangana. I-XRP okwamanje ukuhweba cishe u- $ 0.54 ngemuva kokufinyelela phezulu ku- $ 0.79 kusuka kokuphansi kwe- $ 0.3 kubonwe ngesonto eledlule. Kuyathakazelisa ukuthi iXRP yahlangana ukubuyisa indawo yayo njenge-cryptocurrency yesithathu ngobukhulu ngokwenziwa kwemali emakethe ngemuva kweBitcoin.
Lezi yamuva ukuphakama akukaze kubonwe kusukela ngoMeyi 10, 2018. Ukulandela le rally, idatha ye-chain ibonisa ukuthi inani lama-akhawunti we-XRP nawo akhuphukile. IXRP Ledger ikhombisa ukunyuka ngo-200%, ukufinyelela kumarekhodi angu-5,562 ezinsukwini ezinhlanu ezedlule.
Abahlaziyi abaningi manje baxhumanisa le rally ne-airdrop ehlongozwayo yethokheni ye-'Spark ', uphawu lwendabuko lweplatifomu yekhontrakthi ehlakaniphile iFlare Network. Amathokheni weSpark billion ayizigidi ezingama-45 azokhishwa ngendiza kubanikazi beXRP ngomhla ziyi-12 kuZibandlela futhi asekelwa yingalo kaRipple yokutshalwa kwezimali iRippleX (eyayikade inguXpring).
I-Flare Network iyi- umthetho olandelwayo isivele ihlanganiswe noMshini We-Virtual we-Ethereum onika amandla izinhlelo zokusebenza ze-Ethereum ezisatshalaliswa (DApps) ukuthi zithunyelwe kuFlare ukuxhasa imvelo yeXRP.
Ngokuhambisana nokwenyuka kwamanani, kube nokungena okukhulu kokushintshisana ngemali engaphezulu kwezigidigidi ezi-2.3 zeXRP ezithunyelwa ekushintshaneni. Le datha ikhombisa ukuthi abaphathi abaningi sebevele babhuka inzuzo kusuka e-rally yakamuva.
Amaphuzu avelele we-Crypto: Isonto likaNovemba 20th 2020
Amaphuzu avelele we-Crypto: Ivolumu yokuhweba yokurekhoda ye-PayPal BTC eBinance.US, ama-Bitcoin ATM akhuphuke ngo-85% kulo nyaka, ama- $ 7.6B entshontshwe ku-crypto kusukela ngo-2011, i-Value DeFi protocol igqekezelwe, Enye futhi imfoloko ye-BCH: Kunokuningi kokuvelele kwe-crypto kwaleli sonto.
I-Crypto Exchange Service Yethulwe yiBelarus 'Largest Bank
I-Value DeFi Protocol Ihlushwa Ukuxhashazwa Kwemalimboleko Eyizigidi Eziyisithupha zamaDola.
Imakethe yeDeFi yokuXhuma namafa wangempela womhlaba wezinzuzo zezomnotho
I-Bitcoin Cash Hard Fork Goes Live, ingabe Abanini be-BCH bazothola izinhlamvu zemali ezintsha?
AbaHacker kanye no-Scammers Bantshontshwe ama- $ 7.6 Billion ku-Crypto Kusukela ngo-2011
Ukukhiya kweCoronavirus kushayela ukwamukelwa kwama-Bitcoin ATM akhuphuke ngama-85%
I-DeFi izingqinamba: Inani lomsebenzisi eliphelele lenyuka ngama-55% emavikini ayisithupha nje
I-PayPal Ifinyelela kuma-85% weVolumu yeBinance.US ngenyanga yokuqala
I-Crypto Exchange Service Yethulwe yi-Belarus 'Largest Bank
Ngolunye usuku kwakuyibhange eSingapore, manje iBelarus isematheni; ngabe i-'FOMO 'yesikhungo isiqalile?
Ibhange elikhulu kunawo wonke eBelarus, iBelarusBank lisanda kumemezela ukwethula izinsizakalo zokushintshanisa nge-cryptocurrency. Izinsizakalo ezamukelwe zihlose ukwenza kube lula ukufinyelela ekusetshenzisweni kwama-cryptocurrensets. Ivumela umuntu kalula thenga i-BTC (Bitcoin) ngokushintshana ngezimali ze-Fiat njengedola laseMelika (i-USD), iRussian Ruble (iRUB) neBelarusian Ruble (i-BYN).
Ukuthengiselana kweBelarusbank kususelwa enanini lentengo elifanele ngesikhathi sokuthengiselana. Imininingwane yomsebenzi njengoba ibikiwe kuwebhusayithi kaWhitebird ithi le nsizakalo izokwenziwa online. Ukuthenga nezinqubo zokuthengisa kuzokwenziwa kusetshenziswa amakhadi wokukhokha we-Visa.
"Ukuhweba nge-Bitcoin usebenzisa ama-Euro kungekudala kuzofakwa ohlwini" kusho iBelarusBank.
Umthombo wabezindaba wendawo uveze ukuthi izinsizakalo ekuqaleni zazibhekise ezakhamizi zaseRussia naseBelarus. Kodwa-ke, izinhlelo zizoqhubeka nokwandisa isisekelo samakhasimende ayo ngokuzayo. I-BelarusBank iqhubeka nokuhlela ukubandakanya iWhitebird ukuxhasa ibhange ekunikezeni ezinye izinsizakalo ezihlobene ne-cryptocurrensets kumakhasimende ayo.
Ama-hacks we-DeFi abelokhu enyuka ngo-2020, kusuka ku-bZx protocol hack kuya e-Akropolis. Manje Inani le-DeFi isematheni ngezizathu ezingalungile.
Inani le-DeFi ilahlekelwe amaRandi ayizigidi ezingama- $ 6 ukukhanyisa abasebenzisa imali mboleko NgoLwesihlanu, intambo ku-Twitter ikhombise ubunzima ukuxhaphaza yemalimboleko ye-flash ngumhlaseli ohlukanise imali elinganiselwa ezigidini eziyisithupha zamadola.
U-Emilio Frangella unake isicelo esikhulu semalimboleko se-80,000ETH esivela ku-Aave esifinyelela ku- $ 36 Million ngoNovemba 14, 2020. "Lokhu ukusetshenziswa okuyinkimbinkimbi kunazo zonke engake ngakubona", kusho ozichaza njengelungu elimhlophe nelingumbambisene naye IDeFi Italy.
Inani le-DeFi ithokheni lacwila ngama-25% lisuka ku-2.73 laya ku-2.01 ngesikhathi sokucindezela ngenxa yokuxhashazwa. Kulesi sigameko izintuba zamanani entengo iMulti Stable zisetshenziswe ngemali engango- $ 6million. Ukungezwani komphakathi ukuvumile lokhu kuxhashazwa futhi ucele isikhathi esithile ukusebenza kulungiso lwe-MultiStable vault.
Abahlaseli basebenzise u- $ 0.31ETH kusuka enzuzweni eyenziwe, ukuthumela umlayezo kusisebenzisi se-protocol ikheli, ithi: “Uyazi ngempela imali ebolekiwe?” Njengoba ukuhlaselwa kweDeFi kukhula, uStani Kulechov wakwa-Aave uphawule ku-Twitter wathi "ukwakha iDeFi ekwaziyo ukuqina sekuba nzima".
Imakethe yeDeFi yokuXhuma namafa wangempela womnotho we-Gizinsimbi
Ngonyaka odlule, umhlaba wezezimali uhlangabezane nokuchuma kwezezimali ezisatshalaliswa noma ngeDeFi enezimali ezingaphezu kwezigidi ezingama- $ 13 I-TVL(Inani eliphelele likhiyiwe). Njengohlaka lobuchwepheshe, uDeFi ukhombisile emhlabeni amandla akhe amangalisayo okuguqula ukufinyelela kwimalimboleko yebhizinisi.
Iphrothokholi ye-DeFi inikeza isisombululo se-win-win kubo bobabili crypto abanikazi ngokusebenzisa izindlela zokukhuthaza, ukulima isivuno kanye nababolekayo ngokuthola imali mboleko enemibandela enobungani.
Okokuqala, ukuguquguquka okuphezulu kanye nokubambisene ngokweqile kubangele izinselelo ezinkulu ekubolekisweni kweDeFi. Ukuguquguquka kwesibambiso kwaholela ekulahlekelweni kwe- $ 6.5million DAI ye-MAKER kuphela futhi kungahle kube nokuvela okufanayo ngokuzayo. Okwesibili, ukwehluleka kwamabhizinisi endabuko ukuboleka ku-DeFi kanye nokuhamba kwemali kwangempela ngemuva kwamathokheni we-protocol kubuyisela emuva okukhulu.
Ukuqhubekela phambili, abaqageli bakholelwa ukuthi imakethe yakwaDeFi inesidingo esikhulu sokwakha kabusha ingqalasizinda nezinhlelo ezingavala igebe namabhizinisi endabuko. Kudingeka kube nokuxhumana okungenamthungo phakathi kweDeFi neCeFi ukuze imikhiqizo esezingeni eliphakeme ilwele kangcono emakethe yezezimali.
Kusukela iBitcoin Cash iphume ngeBitcoin, impahla ye-crypto ibanjwe kuwebhu yezimfoloko eziningi ezivela ngenxa yempikiswano eyodwa noma enye. Ngemuva kokuhlukaniswa kwe-BSV, i-BCH isivulele enye imfoloko.
Abantu abanzima kakhulu abanempikiswano ye- (BCH) Imali ye-Bitcoin blockchain manje seyenziwe ekugcineni. Umbiko ngalokhu uthi, “njengamanje kukhona owinile ocacile empikiswaneni phakathi kwamaqembu wonjiniyela we I-Bitcoin Cash (BTC ABC) neBitcoin Cash Node (BCHN).
Ukubheka esilinganisweni se-hashi sawo womabili amaqembu i-BCH, ABC ne-BCHN kukhombisa ukuthi i-BCHN iyona enqobile ngawo wonke amabhulokhi angama-73 amaminerali kusetshenziswa ichibi lezimayini zesoftware le-BCHN.
Ukunqoba kweBitcoin Cash Node bekulindelwe ngisho nangaphambi kwemfoloko enzima yeBitcoin Cash, abasebenza ezimayini abangu-88% bese bevele limenyezelwe ukusekelwa kukaRoger Ver, umakhi oyinhloko we-BCHN. Ngaphezu kwalokho, ukushintshana okukhulu okufana neCoinbase nakho kumemezele ukwesekwa kwabo kwe-BCHN.
Impikiswano Ebangelwa Imfoloko Enzima
Le mpikiswano yaholela ekuphambukeni okugxile ku- "Coinbase Rule", ethi u-8% weMined BCH uqondiswe ku-Bitcoin ABC ukuxhasa ngezimali ukuthuthukiswa komthetho olandelwayo. URoger Ver ubheka umthetho weCoinbase obonakalayo njengephupho lomhleli ophakathi wesitayela seSoviet lifezeka futhi ngenxa yalokho wayephikisana nalo.
Izimali zokukhwabanisa ezingaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 7.6 kusolwa ukuthi zebiwe kusukela ngo-2011 ngamagama amabhakede amabili abikezela; Ama-Hacks nama-Scams. Ngokombiko, kwebiwe amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama- $ 2.8 nge-Hacks okuhlanganisa cishe ukuhlaselwa okungu-113, okuyisona esikhulu kunazo zonke kube ukugqekezwa kweCoincheck ngonyaka ka-2018 ngemali engangezigidi ezingama- $ 535 zeNEM Coin.
I-United States, i-United Kingdom, i-China, i-Japan ne-South Korea ibhekane nenani eliphakeme kakhulu lokuphulwa kwezokuphepha kokushintshisana, lapho i-United States ihamba phambili ngokuhlaselwa okuhlosiwe okungaba ngu-13. ICrystal blockchain ithole izinhlelo ezingama-23 zokukhwabanisa ezivelele ngama- $ 4.8 billion abiwe ngobugebengu.
U- $ 7.6 billion ukulinganiselwa okuphelele kwezimpahla ze-crypto ezebiwe eminyakeni eyishumi eyedlule, lapho iChina ihola khona iphakethe ngokulingana nozakwabo abakhulu. Ngokudabukisayo, inani lamahacks nemikhonyovu eyinkimbinkimbi lisazokwenyuka njengoba iminyaka ihamba.
Ukwehliswa kweCoronavirus kushayela ukwamukelwa kwama-Bitcoin ATM up ngo-85%
Emhlabeni jikelele, ukufakwa komshini wokutshela othomathikhi weBitcoin kwanda kulo nyaka ngenxa yesidingo esenziwe yi-coronavirus sokuthengiselana okungaxhunyanwa nabo. Inani lama-ATM e-BTC lenyuke ngo-85% okuletha ingqikithi ku-11798, njengoba kubikiwe Idijithi ye-ATM yenkokhelo.
Komunye umbiko ka I-Global Trade Magazine, yembula ukwamukelwa okwandayo kweBitcoin njengoba ukwesaba ukutheleleka nge-coronavirus kusheshisa ukukhula kwemakethe. Ama-ATM we-Bitcoin avumela ukuthengiselana kusetshenziswa amakhadi esikweletu noma asebhange, kuwo womabili amadivayisi eselula noma ekhompyutha.
Ama-ATM angaphezu kwe-800 BTC afakiwe ngo-Okthoba e-US kuphela futhi amazwe amaningi kungenzeka alandele lokho. Lokhu kushayela kwandise ukubamba iqhaza nokusetshenziswa kuma-cryptocurrensets emhlabeni jikelele njengoba iBitcoin imasha inamandla kunanini ngaphambili ukuya ekwamukelweni okuvamile. Njengoba izinkampani ezinkulu njengePayPal manje ziboleka ukuxhaswa kwazo, ama-cryptocurrensets asethwe kahle ukuba angene egagasini elilandelayo lokwamukelwa kwabantu abaningi.
I-DeFi izingqinamba: Ingqikithi yenombolo yomsebenzisi efike ku-55% ku-just amasonto ayisithupha
Awukwazi ukugcina umhlaba we Izimali ezihlukanisiwe ngaphandle kokubukwa. IDeFi ikwazile ukuqopha ukukhula okushayayo okungama-55% kunombolo ephelele. labasebenzisi emavikini ayisithupha edlule naphezu kokulahlekelwa okukhulu okutholwe ngenyanga edlule. Kakhulu ngenxa ye- ukunganaki okuzungeze iDeFi, abagxeki abaningi basheshe babhala "bubble DeFi". Ukulinganisa amamethrikhi nokho kufakazela ukuthi imboni yagcina ukukhula komkhakha obanzi.
Imakethi ye-Crypto data aggregator Izibalo ze-Dune kuqaphele ukuthi inani eliphelele labasebenzisi be-DeFi elihlukile lenyuke cishe izikhathi eziyishumi uma kuqhathaniswa nezibalo zangonyaka owedlule. Ukunikeza umbono othile, abasebenzisi abasha abangu-85,000 batholakala bengezwe kwinombolo ekhona yabasebenzisi beDeFi phakathi kwamasonto amabili okuqala kaNovemba 2020.
I-Compound ne-Dydx baphakathi kwabazuzi abanamandla kakhulu bakwaDeFi ezikhathini zakamuva. Ukungashintshwa nakho kukhule ngokushesha njengenombolo yokubhanqa pink ngama-34%. Ukwenza okungashintshaniswa, ijika, ukushintshwa kwe-Sushiswap kanye ne-Ox ngaphezulu kokungu-91% kokushintshaniswa okuphelele okusetshenzisiwe.
I-PayPal Ifinyelela kuma-85% weVolumu yeBinance.US kokuQala Inyanga
Abasebenzisi baseMelika bavala ngokurekhoda ivolumu yokuhweba eyi- $ 25 million ku Binance.US exchange, kungakapheli inyanga eyodwa kwethulwe insizakalo ye-PayPal's crypto. Ngomhla ka-13 Novemba, i-PayPal yaphakamisa ifayela le- isikhathi sokulinda kumakhasimende ayo ase-US.
I-PayPal iqale iminikelo ye-crypto ngokubambisana nePaxos ngo-Okthoba. Ivolumu yokuhweba yansuku zonke ivuliwe I-Paxos insizakalo yokuhweba, Ukushintshaniswa kwe-ItBit wavuka cishe izikhathi ezine phakathi kukaNovemba. Ngemuva kokwethulwa kwe-crypto kwe-PayPal, kwaqoshwa ama- $ 30 million USD emisebenzini yosuku kuletha i-PayPal emakhasini angaphambili ezindaba ezinkulu nezinkundla zezindaba.
Kodwa-ke, i-PayPal isadinga ukumboza umhlaba obalulekile, ngaphambi kokuthi ikwazi ukuqoqa umncintiswano ngokukhululeka ngokushintshana okufana Kraken futhi ICoinbase Pro lapho ivolumu yokuhweba yansuku zonke idlula u- $ 500 million. I-PayPal kungenzeka ivule isigaba esilandelayo sokutholwa okujwayelekile kwe-cryptocurrency ngokusebenzisa ichibi layo labasebenzisi abathengisa abayizigidi ezingama-364 njengoba imisebenzi yokusebenza iqala e-US.
Ngalesi sikhathi, i-PayPal isekela ama-cryptocurrensets amane kuphela: i-Litecoin, i-Bitcoin, i-Bitcoin Cash, ne-Ethereum. Kunezinhlelo zokunweba kulo lonke elaseYurophu kunokuya emhlabeni wonke ngokwenza insizakalo yayo itholakale kubo bonke abasebenzisi be-PayPal.
Okufanele kushiwo ukuthi i-PayPal ayivumeli abasebenzisi ukuthi bakhiphe i-cryptocurrency yabo epulatifomu yabo, behlula ngempumelelo yonke inhloso yokuthenga ama-cryptocurrensets nge-PayPal. Ngaphezu kwalokho, i-PayPal inerekhodi lama-akhawunti wokuqandisa ngaphandle kwesixwayiso, ishiya amanye amaklayenti engenandlela yokuphikisana nesinqumo se-PayPal futhi angahle ashiye amanye amaklayenti ngokulahlekelwa okukhulu.
Njengoba kushiwo ngaphambili eposini lethu elinesihloko esithi “Izindlela ezi-4 ezihamba phambili zokulandela ukuvikela i-Cryptocurrency Holdings yakho”, Uma ungenabo okhiye besikhwama (semali) sakho se-idijithali yemali, ungahle ubheke ukuthi i-idijithali yemali akuyona eyakho. Ngakho-ke kuwukuhlakanipha ukuthenga ama-cryptocurrensets ngokushintshana okufana Binance okukuvumela ukuthi ukhiphe i-crypto yakho kukheli lakho le-wallet.
By I-Crypto Gator Posted on November 23, 2020
Izindlela ezi-4 ezihamba phambili zokulandela ukuvikela i-Cryptocurrency Holdings yakho
Esinye sezifundo ezibaluleke kakhulu ezinconyelwe i-newbie esikhaleni se-idijithali yemali ukuthi ungaziphatha kanjani ngokuphepha futhi uzigcine izimpahla ze-cryptocurrency. Lesi mhlawumbe yisifundo esibaluleke kunazo zonke ku- imfundo ye-crypto ikakhulukazi lapho uqala. Kulesi sikhala, uyibhange lakho futhi ngenxa yalokho ubophezeleke kakhulu kunoma yikuphi ukulahleka okungahle kwenzeke.
Kusuka ekuthengeni i-cryptocurrency usebenzisa i i-crypto exchange ukuthola i isikhwama esiphephile sokugcina & ukuthengiselana okuphephile kwama-cryptocurrensets nsuku zonke, okuningi kungahle kungahambi kahle ngenxa yokungazi noma ukungabi nalwazi olwanele kuma-cryptocurrensets. Ngakho-ke ake sikhulume kancane ngobuchwepheshe be-blockchain nokuthi ama-cryptocurrensets abopha kanjani kuwo.
I-Cryptocurrency neBlockchain: Ake sazi izisekelo!
1. Ukukhetha i-Bitcoin Wallet
2.I-Crypto Wallet Security
3. Ukwenza isipele I-Wallet Yakho Ngokuphepha
4. Hhayi Okhiye Bakho, Hhayi Izinhlamvu Zakho Zemali!
I-Bitcoin kwakuyi-cryptocurrency yokuqala yasungulwa ngu umuntu ongaziwa noma iqembu labantu ngaphansi kwegama lomgunyathi uSatoshi Nakamoto ngemuva kwenkinga yezimali yango-2008. Kusukela kwaqala, iBitcoin namanye ama-cryptocurrensets aqhubekile nokumasha ebhekisa ekwamukelweni okujwayelekile.
I-cryptocurrency ngokuyisisekelo iyimali ebonakalayo noma yedijithali evikelwe yi- ileja ye-cryptographic okwenza kungabi lula ukukhiqiza izinto zomgunyathi futhi kwenze kungabi namandla okusebenzisa imali ephindwe kabili. Ama-cryptocurrensets amaningi asatshalaliswa futhi akhiwe ngaphezulu kwe- Ubuchwepheshe be-blockchain.
Isici esivamile phakathi kwama-cryptocurrensets amaningi ukuthi akhishwa noma alawulwa yinoma yiliphi iqembu eliphakathi. Ngakho-ke, amelana nokuvinjelwa nokuphazanyiswa nguhulumeni noma ukukhohliswa. Ngokwakhiwa, zisatshalaliswa.
Ama-cryptocurrensets angenziwa ngqo phakathi kwamaqembu ngokukhululekile ngaphandle kwesidingo seqembu lesithathu; awekho amabhange, alukho uhlelo lokungena. Imvamisa, kukhokhiswa imali yezimayini ngokuthumela ama-cryptocurrensets, akhokhwa ngumthumeli. Iningi lama-blockchains lisekela imali ephansi engaphansi kwesenti noma amasenti ambalwa ancintisana kahle nemali eqolo ekhokhiswa amabhange.
I-Bitcoin isebenza ngobuchwepheshe obungenakuthembela nobusobala beleja (blockchain) obusakaza ikhophi yakho konke ukuthengiselana kwayo kubo bonke abathintekayo. Konke okwenziwayo ngakho-ke kuyabonakala futhi kungaqinisekiswa yiwo wonke umuntu okwinethiwekhi.
Ekuqinisekiseni ukuthengiselana ubuchwepheshe be-blockchain buthatha i-algorithm yokuvumelana. Ukuze noma iluphi ushintsho lwenziwe kunethiwekhi, ukuvumelana kufanele kufinyelelwe yibo bonke ontanga benethiwekhi (for. Isib bonke abavukuzi esimweni seBitcoin). Uma ushintsho oluhlongozwayo luhluleka ukuthola ukuvumelana okudingekayo, lolo shintsho luzokwehliswa yinethiwekhi ngokuzenzakalela.
Ukuthenga imali yedijithali okokuqala bekungasho nokuthola i- i-cryptocurrency wallet ethembekile ukugcina izimpahla zakho ngokuphepha. Ukwazi izici ezifanele okufanele uzibheke lapho ukhetha i-crypto wallet yakho kubaluleke kakhulu kumuntu othanda i-crypto. Abaningi bake babhekana nezinhlekelele futhi kwesinye isikhathi balahlekelwa yithemba kuma-cryptocurrensets ngokuphelele njengomphumela wokukhetha ngokunganaki izinketho ezingaphephile kangako kuma-crypto wallet.
Abasebenzisi be-Cryptocurrency banenketho yokukhetha phakathi kwe-inthanethi, okungaxhunyiwe ku-inthanethi noma izikhwama zehadiwe. Kuncike ekukhetheni okwenzayo ukuxazulula isikhwama semali esinezici eziphephe kakhulu kulungile. Yize izikhwama ezingaxhunyiwe ku-inthanethi neziku-inthanethi zikhombisile ukuthi zivikelekile, noma kunjalo, izikhwama zehadiwe aziwa ngokuhlinzeka ngokuvikeleka okuphezulu kakhulu kwempahla yakho yedijithali.
Ama-wallet aku-inthanethi ngokuvamile akhululekile, asebenziseka kalula futhi atholakala kalula futhi ngenxa yalokho, yizikhwama ezisetshenziswa kakhulu embonini ye-crypto. Ngasikhathi sinye, yibona abasengozini enkulu phakathi kwezinhlobo ezahlukahlukene zezikhwama ze-crypto. Eduze kwe- isikhwama semali, isikhwama esingaxhunyiwe ku-inthanethi sinikeza ukuphepha okungcono kakhulu kwempahla yakho ye-crypto. Ngesikhwama esingaxhunyiwe ku-inthanethi, ubeka engcupheni yokulahlekelwa yimali yakho kuphela uma ulahlekelwa isiliphu sephepha.
2. Ukuphepha kwe-Crypto Wallet
Uma ucubungula isikhwama sewebhu, qiniseka ukukhetha ohlwini lwezikhwama ezivikeleke nge-HTTP (HTTPS). Unganciphisa ukukhetha kwakho ngokuya ngokuthi ngabe isikhwama semali sinikwe amandla i-2FA / MFA futhi sinokusekelwa kwephasiwedi enamandla. Isikhwama sewebhu esingasekeli lezi zici singadala izingozi ezimali zabasebenzisi. Blockchain.com yisibonelo esihle salokho esikhwameni esiku-inthanethi, esisebenziseka kalula futhi esifanele ukugcinwa okuphephile. Izikhwama ezikwi-inthanethi zivame ukubizwa ngokuthi ifu ama-wallet.
Uma ukuphepha kucatshangelwa okuphezulu ngaphezu kobungani bomsebenzisi, izindleko zensizakalo njll, isikhwama sehadiwe sinconywa njalo. ULedger Nano X yaziwa kabanzi phakathi kwezikhwama zehadiwe laphaya futhi kuzikweletu zayo ngokomlando iqophe cishe ukuhlaselwa okunguziro esikhathini esedlule.
Izikhwama eziningi zeBitcoin yiMultisig; okusho ukuthi badinga ukhiye ongaphezu koyedwa ukugunyaza ukuthengiselana (kuthatha amaqembu amaningi ukusayina ukuthengiselana ngaphambi kokuba kwenziwe). Le ngenye indlela enhle yokuvikela i-Bitcoin ekwebiweni okungaba khona. Ezinye izikhwama zemali ezithandwayo eziningi yi-Trust Wallets, Coinomi, Blockchain.com wallet yeselula, njll.
Uma usebenzisa isikhwama se-cryptocurrency okokuqala ngqa, ukunamathela esikhwameni esivikelekile kodwa esisebenziseka kalula kufanele kube umgomo wakho. Izikhathi eziningi, ukulahleka kwenzeka ngenxa yolwazi olunganele lokuthi ungazisebenzisa kanjani izimpahla ze-cryptocurrency. Lezi zinhlobo zokulahleka ziyakhuliswa uma isikhwama semali sinzima; okwenza kube nzima ukuzulazula phakathi.
Vele, kukhona izimo lapho izimpahla ze-crypto zilahleka lapho uzithumele kumamukeli ongalungile. Isibonelo, i-Bitcoin ithunyelwa ekhelini le-ETH; ikakhulukazi lapho usebenzisa izikhwama zemali enezimali eziningi. Amacala afana nalawa ajwayelekile kepha ahlukaniswa njengephutha le-rookie. Ngakho-ke, izikhwama ezingamaki ikheli elingavumelekile kufanele zigwenywe ngokuphelele.
3. Ukwenza Isipele Sakho Ngokuvikela
Uzoba nokulawula okuncane noma ungabi nakho nakancane esikhwameni sakho semali uma singenziwanga isipele kahle. Isikhwama esijwayelekile siqukethe ukhiye wangasese nowomphakathi. Njengoba igama lisho, okhiye bomphakathi abayimfihlo; zingabonwa yinoma ngubani ngaphandle kwemiphumela engaba khona. Okhiye bomphakathi baphatha imininingwane mayelana nawo wonke umlando wokuthengiselana kwakho. Noma ngubani obamba okhiye bakho abasesidlangalaleni angabuka wonke umlando wakho wokuthengiselana kepha akakwazi ukwenza ushintsho kubhalansi yakho yesikhwama.
Okhiye abazimele ngakolunye uhlangothi okhiye abayimfihlo futhi babaluleke kakhulu; kufanele zigcinwe ziyimfihlo kunoma yimuphi umuntu wesithathu. Okhiye abayimfihlo bangokhiye abakhulu bezimali zakho, noma ngubani onokhiye bakho abayimfihlo angasebenzisa izimali zakho ngaphandle kwemvume. Leyo ntambo yezinhlamvu yiyo yonke into oyidingayo ukuthola imali yakho uma kwenzeka ulahlekelwa ukufinyelela kudivayisi yakho ephathekayo noma i-PC egcine isikhwama sakho semali.
Ngakho-ke, kufanele ikopishwe kahle futhi igcinwe kwenye indawo ngasese ukuze ivikelwe kakhulu. Kuwumkhuba omuhle ukugcina lezi zinkinobho ezindaweni eziningi ezingaxhunyiwe ku-inthanethi. Ungalokothi ugcine okhiye bakho abangasese ku-inthanethi ikakhulukazi kwi-imeyili noma ku-database emaphakathi engasetshenziswa.
Lapho ukhetha isikhwama se-cryptocurrency, qiniseka ukuthi isikhwama sikunikeza inketho yokuthumela okhiye bakho abangasese kufayela elibethelwe. Gwema ukuthatha izithombe-skrini zokhiye bakho abayimfihlo noma umushwana wokungena, njengoba ezinye izinhlelo zokusebenza zingafinyelela kusikrini sakho namafayela.
Kubhekwa futhi njengomkhuba omuhle ukuzama ukubuyisa izimali zakho usebenzisa lezo zinkinobho eziyimfihlo noma amagama wokungena ukuqinisekisa ukuthi isipele sakho siyasebenza. Noma kunjalo, zisebenza ngaphandle kokwehluleka uma zikopishwe kahle.
Kungenzeka ukuthi mhlawumbe uzwile ngalesi sitatimende izikhathi ezimbalwa! Lesi sitatimende siba ngumndeni we-crypto phakathi kokudlondlobala okukhulayo phakathi kokuhwebelana okuphakathi okugcina okhiye bakho kepha kungakuniki ukufinyelela kuzo.
Uma ungekho okhiye bakho, unokulawula okulinganiselwe kwizimali zakho - kulula njengalokho! Yize ukuhwebelana okuphakathi kusebenza kalula futhi okungcono kakhulu ekuhwebeni, zihlala ziyizisulu eziyinhloko zama-crypto hacks, ngoba abasebenzisi abanjalo bangalahlekelwa yimali yabo kalula uma kwenzeka kuhlaselwa ngezinga elikhulu.
Ukushintshaniswa okuphakathi kwe-idijithali yemali kungakuphika ukufinyelela kwemali yakho nganoma yisiphi isikhathi, wenze ngokuyalelwa nguhulumeni ukuthi uthathe izimpahla zakho noma umane uphenduke ibhizinisi elikhohlisayo bese untshontsha imali yakho.
Ukugcina lokhu engqondweni, ukushintshana nge-idijithali yemali akuyona indawo enhle yokugcina izimpahla zakho ze-crypto ngaphandle kokuhweba okwesikhashana. Uma kuba okubaluleke kakhulu ukuhambisa izimali zakho ze-crypto kungxoxo, kungcono ukunamathela ku abanedumela elihle.
Isikhwama esisezingeni eliphansi esikunikeza ukufinyelela kokhiye bakho abayimfihlo kufanele kube inketho ekhethiwe yokugcina izimpahla ze-cryptocurrency. Ukuphepha kwe-Crypto kungenye yezihloko okuxoxwa ngazo kakhulu embonini, kepha abantu abaningi abazinaki ngokwanele.
Iningi Ukwebiwa kwe-crypto, hacks, kanye nemikhonyovu kwenzeka ngenxa yamaphutha, ubudedengu ngabasebenzisi okuqhubeka kugcizelela ukubaluleka kwe- imfundo ye-crypto, ikakhulukazi njengoba ukuphepha kwe-crypto kuyisifundo sayo esibaluleke kakhulu.
By I-Crypto Gator Posted on November 18, 2020
Izindaba zeCrypto & Blockchain - Isonto likaNovemba 11th 2020
Amaphuzu avelele we-Crypto: ILebanon izokwethula izimpahla ezidijithali, ama-DeFi hacks ayanda, iNew Jersey yethula ilayisense le-Crypto, amafayela weCred wokuqothuka, iKoCoin ibuyise i-crypto engu-84% eyebiwe: imininingwane emnandi engezansi!
I-crypto yaleli sonto igqamisa ngo- I-Crypto Gator gxila ezindabeni eziphezulu ezilandelayo nakwabanye abaningi abavela emhlabeni jikelele.
Izihloko zezindaba eziphezulu ze-Crypto
Izindaba eziphezulu ze-Crypto
ILebanon izokwethula imali yedijithali lapho ibhekene nezinxushunxushu zezomnotho nezezezimali
Umbiko: Ubugebengu be-Crypto bunqabile ngo-2020, kodwa ama-hacks e-DeFi ayanda
Uhlelo lwaseNtshonalanga Afrika Luzogcina Imininingwane Yesimo Sezulu kuTelos Blockchain
INew Jersey Isondela Eduzane Nelayisense Le-Crypto Ngokungeniswa Komthethosivivinywa weSenate
Umbolekisi wemali yedijithali amafayela weCred for bankruptcy
UKuCoin ubuyise u-84% we-crypto eyebiwe ngemuva kokugenca kuka- $ 280M, kusho omunye wabasunguli
Wonke amabhange amakhulu azoba nokuvezwa kweBitcoin, kusho iMenenja Yesikhwama Esaziwayo uBill Miller
Ngemuva kokugencwa okukhulu kukaKucoin, u-CEO uJohnny Lyu wamemezela ngoNovemba 11 ukuthi inkampani ibuyise kuze kube ngu-84% wezimpahla esezintshontshiwe kulesi sehlakalo esidume kakhulu sakamuva.
Umbolekisi omkhulu we-crypto u-Cred kubikwa ukuthi ufake amaphepha okuqothuka kulandela imibiko yokuthi ibhalansi yayo "ithintwe kabi" "ngumenzi wobubi"
Ukuqhamuka kwamanje kweDeFi kudonse amaqanda amaningi amabi okuholele ekukhuleni kwama-hacks weDeFi yize kwehle kakhulu imikhonyovu ye-crypto ngo-2020.
Umthombo wesithombe: Forbes
Njengoba imali yedijithali iqhubeka nokuthola ukutholwa okukhulu, amazwe amaningi manje abheke ukwethula uhlobo lwedijithali lwemali yawo yomdabu ukunqanda amaqiniso abucayi kwezomnotho. Ngalokhu kukhanya, iLebanon manje ithatha umzila ofanayo. Njengoba kumenyezelwe yibhange eliphakathi nezwe, iLebanon ilungiselela ukwethulwa kwemali yayo yedijithali ngo-2021.
"Kumele silungiselele iphrojekthi yemali yedijithali yaseLebanon," kuphawula umbusi webhange eliphakathi uRiad Salameh. USalameh okushiwo ukuthi balinganisele ukuthi kunama- $ 10 billion agcinwe ngaphakathi emakhaya ngokusho kweNational News Agency kahulumeni. Imali yedijithali ibekelwe ukubuyisa ukuzethemba futhi ohlelweni lokubhanga.
Ibhange eliphakathi liphawule ukuthi iphrojekthi yemali yedijithali ehlelelwe ukwethulwa ngo-2021 izobamba iqhaza ekusetshenzisweni kohlelo lwezezimali olungenamali ukuze kuthuthukiswe ukugeleza kwemali kwasekhaya nakwamanye amazwe.
Ngokusho eBhange Lomhlaba, imali ekhokhwa ezweni uqobo ifinyelela cishe ku-14% we-GDP yayo. Lokhu ngokungenakuphikiswa kuzokhuthaza uhlelo lokuthumela imali olungenakho ukungqubuzana luvela endaweni enkulu yomhlaba wonke.
Akungabazeki ukuthi i-2020 ibiyinto emangazayo yeDecentralised ezezimali (DeFi), ngokukhuphuka kwenzalo enkulu. Ukwamukelwa okuhambisana nomkhakha wemboni bekufana ngokulingana nokunyuka kwama-protocol hacks ashiye kakhulu Defi amaphrojekthi opha aze afe.
Nakuba, idatha kusuka i-crypto analytics firm CipherTrace ikhombisa ukuthi inani eliphelele lokulahleka kwe-crypto njengomphumela wokwebiwa kwe-crypto, ukukhwabanisa, kanye nama-hacks wehla kusukela $ 4.4 billion ku-2019 kuya ku- $ 1.8 billion ngaphezulu kwezinyanga eziyi-10 zokuqala zika-2020, kukhombisa ukwehla okukhulu kobugebengu be-crypto. Isikhulu seCipherTrace uDave Jevans uqhubeke nokugcizelela ukuthi ukwehla okukhulu kwamacala obugebengu be-crypto kuyisivumelwano sentuthuko yakamuva yezinyathelo zokuphepha ezisatshalaliswe kuyo yonke imboni.
Yize kwehle ubugebengu be-crypto ngo-2020, iCypherTrace iphinde yalandisa ukuthi kube nesikhali esikhulu esibhekiswe kumaphrojekthi weDeFi okuholele ekukhuleni kwama-DeFi hacks manje asebenza ngama-20% akho konke ukulahleka kwe-crypto ngenxa yokweba. "Ukwanda kweDeFi yikhona okugcine kudonse izigebengu ezigenca ubugebengu, nokuholele ekutheni kube nezingqinamba eziningi kulo mkhakha kulo nyaka," kuqhubeka lo mbiko.
Imashi yokuya ekutholakaleni okujwayelekile iyaqhubeka njengoba iZizwe eziningi zibheka ukuzuza amandla we-blockchain. Okwamanje, ipulatifomu edumile ye-blockchain I-Telos ifinyelele kubambiswano nenkampani yobuchwepheshe besimo sezulu evulekile ITelokanda Weather Group. Ubambiswano kuhloswe ngalo ukwethula uhlelo oluhlanganayo nolwabelana ngemibiko yesimo sezulu esifundeni esiseNtshonalanga ne-Afrika ku-vimba yomphakathi weTelos.
Ngokwemininingwane, inkampani yaseNtshonalanga Afrika izosebenzisa i-Telos blockchain ukusiza abafundi bezikhungo zemfundo ephakeme kanye nomphakathi olimayo ukurekhoda nokwabelana ngemibiko yesimo sezulu ngenhloso yokwenza ngcono ucwaningo lwesimo sezulu, ukubikezela isimo sezulu sendawo, kanye nokulandelwa kwesiphepho.
Njengesikhathi sokuhlanganisa lolu lwazi, iTelokanda isivele ifinyelele kubambiswano ne University of Uyo futhi IYunivesithi yaseRivers State eNigeria, futhi City Academic lapho abafundi bazokwazi ukuqalisa khona amabhaluni okulandelela isimo sezulu ngokulandela idatha.
Ukuqala phansi, uTelokanda uhlela ukuthi inyuvesi ngayinye yethule ibhaluni elilodwa ngesonto, nokwengeza ukwethulwa kwansuku zonke ngonyaka ka-2021, kusho isikhulumi.
INew Jersey Isondela Eduzane Nelayisense Le-Crypto Ngokungeniswa kweSenate Bill
Umthethonqubo we-Crypto ube yisihloko esishisayo embonini kulo nyaka futhi njengoba bekulindelekile, amafemu amaningi e-crypto maningi amathuba okuthi atshekele ezifundeni ezithuthukisa imithethonqubo ye-crypto efanelekile. Yize isizathu semithethonqubo singahluka ngeziphathimandla futhi ngenxa yalokho amazwe amaningi asevele ebhala imithetho yokulawula imisebenzi ye-crypto. INew Jersey ingeyakamuva kulolu hlu.
I-New Jersey crypto bill “IDigital Asset and Blockchain Technology Act” ibixhaswe nguSenen Nellie Pou ngoLwesine, mhlaka 3 kuMfumfu. ISenate bill 3132 imi endaweni yokulawula abahlinzeki bezinsizakalo ze-cryptocurrency ngaphansi kokubuka koMnyango Wezebhange Nomshuwalense we-NJ.
Lo mthethosivivinywa omusha usho ukuthi amabhizinisi nabantu ngabanye bazonqatshelwa ukwenza noma yimiphi imisebenzi yebhizinisi le-crypto ngaphandle kokuthi bathole ilayisense ngokufanele eNew Jersey noma banelayisense yokuphindisela kwesinye isimo.
Ngenxa yalokhu, noma yiziphi izinhlangano ezingekho emthethweni ezisebenza ngebhizinisi le-crypto eNew Jersey zizokhokhiswa imali engu- $ 500 ngosuku kuze kube kufakwa isicelo selayisense.
Umbolekisi wemali yedijithali Amafayela we-Cred wokuqothukay
Ama-Crypto hacks nokukhwabanisa kube yisifo embonini futhi kube negalelo elikhulu ekungabikhona kwamanye amafemu e-crypto aqala ngenothi elikhazimulayo. Ekuthuthukisweni kwamuva nje, uCred umnikezeli wesevisi yemali edijithali onikeze inzalo kumadiphozithi emali edijithali kubikwa ukuthi ufake ifayili lokuqothuka njengoba inkampani imemezela ibhalansi elibi.
Ngo-Okthoba 28, iCred iveze ukuthi ibhalansi yayo "ithinteke kabi" "ngumenzi wobubi." Ngemuva kwalokhu, uCred kuthiwa ubemise imali ekhishwa ngamakhasimende kwaCredEarn, okuyinkampani eyenza inzalo.
Esahlukweni 11 kufakwe idokhumenti yokuqothuka nguCred ngoNovemba 7, inkampani kubikwa ukuthi inezimpahla eziphakathi kuka- $ 50- $ 100 million kodwa isikweletu esingu- $ 100- $ 500 million. Lokhu kukhombisa ukuthi uCred ukhathazekile ngokwezezimali isikhashana ngaphambi kokugcwalisela ukuqothuka.
Ngenxa yalokho, imali yedijithali ukuhweba ipulatifomu Uphold ibuqedile ubudlelwane bayo neCred njengoba kumenyezelwe ku iposi blog, Uphold uqhubeke wathi bamangalela abakwaCred LLC nezinhlangano ezingaphansi kwayo, kanye nabasunguli beCred ngezinsolo zokukhwabanisa, ukwephula isivumelwano, nokulimaza igama.
Ukudlulela phambili kulesi sigaba, iCred kusolwa ukuthi iqashe i-MACCO Restructuring Group ukuthi ihole izinsizakalo zayo zokweluleka kwezezimali ekuhloleni amathuba okuhlangana nawokutholakala atholakalayo.
UKuCoin ubuyise u-84% we-crypto eyebiwe ngemuva kokugenca kuka- $ 280M, kusho okutholakeleer
Izinga lokugenca likaKuCoin liphakathi kokwebiwa kwemali enkulu kwe-crypto ngo-2020. Yize kube nentuthuko ekusetshenzisweni kwezokuphepha, ukushintshaniswa kwe-crypto kuseseyona nto ebhekiswe kakhulu kubaduni kanye nabalingisi abangenasimilo. NgoSepthemba 25, ukuhwebelana okuthandwa kakhulu kwe-crypto kwaba kubikwa ukuthi zigqekeziwe ngemali elinganiselwa ezigidini ezingama- $ 280, okuholele ekutheni izimpahla eziningi ze-ERC20 neBitcoin zisuswe ekushintshaneni.
Ekuthuthukisweni kwakamuva kakhulu, iKuCoin imemezele ukuthi ikwenzile yabuyiselwa iningi lezimali lilahlekelwe yisigidi esingu- $ 280 million isigameko sokugenca ngoSepthemba. Isikhulu esiphezulu se-Kucoin, uJohnny Lyu umemezele ngoNovemba 11 ukuthi le nkampani kuze kube manje isibuyisele kufinyelela kuma-84% wezimpahla esezintshontshiwe kulesi sigameko esikhulu.
Ngokusho kukaLyu, inqubo yokululama ibandakanya "ukulandelela izinkontileka, ukuthuthukiswa kwezinkontileka, nokululama kwezomthetho." Ubuye waphinda wathi ukushintshana ezinsukwini ezizayo kuzoshicilela imininingwane ethe xaxa mayelana nokubuyiselwa kwemali lapho kutholakala yonke imininingwane yokugenca.
U-Kucoin ekugcineni uqala izinsizakalo ezigcwele kancane kancane, kuze kube manje, ukushintshaniswa sekuqalise izinsizakalo ezigcwele zokuhweba nge-176 esiphelele Izimpahla ezingama-230 ezithengiswayo kuze kube manje. Isikhulu esiphezulu siphawule ukuthi izinsizakalo ezigcwele zezimpahla ezisele zizovulwa ngaphambi kukaNovemba 22.
Wonke amabhange amakhulu azoba nokuvezwa kweBitcoin, kusho uBill Mill weMenenja Yesikhwama Esaziwayoer
Njengoba iBitcoin iqhubeka nokumashela ekwamukelweni kwezikhungo, kunesiphakamiso esithandwayo sokuthi maduzane amabhange kuzodingeka anikele ngezinsizakalo zezezimali ze-crypto ukuze zibhekwe njengebhange eligcwele. UMphathi weSikhwama owaziwayo uBill Miller muva nje uqondanise imicabango yakhe ngalokhu.
Ngokusho kumtshali-zimali odumile uBill Miller, amabhange amakhulu, izinkampani ezibiza kakhulu, izindlu zokutshala imali zizosala zingenakho ukukhetha ngaphandle kokuchayeka kakhulu kwiBitcoin, futhi ngenxa yalokho zamukele impahla yedijithali.
Okushiwo nguMiller kwizibalo ezikhulayo zamabhizinisi ezinkampanini njengamanje ethola ukuvezwa okuthe chithi saka kweBitcoin, futhi ngenxa yalokho wenza izibikezelo sokuthi ezinye izinhlangano zebhizinisi zizolandela kanjani. Amafemu asezingeni eliphakeme amukele iBitcoin ngo-2020 afaka utshalomali lweMicrostrategy's $ 425 million, iPaypal yethula insizakalo ye-cryptocurrency, kanye nokutshalwa kwezimali kweBitcoin.
Ukuvezwa kwezikhungo kubalulekile ukuthi iBitcoin ithole ukwamukelwa okujwayelekile, futhi ngokusho kukaMiller, ukunyakaza kwakamuva kwamafemu asevele amukele iBitcoin kungakhuthaza ezinye izinkampani ezinkulu ukuba zisebenze.
Ephawula ngokuheha kwe- Ukutshala imali kweBitcoin, UMiller uphinde wakubeka ukunikezwa okulinganiselwe kweBitcoin njengesizathu esikhulu sokuthi kungani ukufunwa kuzohlala kuhlala ohlangothini oluphakeme. I-Bitcoin iyi-protocol ye-ledger esezingeni eliphakathi nendawo, enokunikezwa okulinganiselwe kanye nesidingo esandayo. Ukunikezwa kweBitcoin kukhula kancane cishe cishe ku-2.5% ngonyaka futhi kutholakala ku-21 Million inani lokunikezwa kweBitcoin ngonyaka ka-2140.
By I-Crypto Gator Posted on November 13, 2020
Umphathi wempahla ka- $ 10B ubhalisa isikhwama esisha se-Bitcoin nge-SEC
Stone Ridge Asset Management, the parent company of New York Digital Investment Group, or NYDIG, has been actively pursuing new investment vehicles for Bitcoin. On Friday, Stone Ridge’s open-end mutual fund revealed a new Bitcoin-focused investment strategy.
By Posted on 1 ihora eledlule
I-CZ Iveza Ukuthi Kungenzeka Kwe-IPO Kusasa likaBinance US
Changpeng Zhao (CZ), CEO of Binance, has alluded to the possibility of an initial public offering (IPO) in his company’s future.
The post CZ Reveals Possibility of IPO in Binance U.S.’s Future appeared first on BeInCrypto.
By Posted on amahora 2 edlule
Isibikezelo Sentengo Yegolide: Ubungozi Bokungazinzi Njengama-Fed Meeting Looms
Gold price action is primed for volatility next week with the Fed decision on deck. How real yields and the US Dollar react to fresh guidance from Fed officials will be key for gold outlook.
The WisdomTree Bitcoin ETF is one of the most significant ETF applications to hit the SEC desk after VanEck. But the agency’s cautious approach puts it in the same position as other applications.
The post What the ETF: Will the WisdomTree Bitcoin ETF Be Approved This Year? appeared first on BeInCrypto.
By Posted on amahora 3 edlule
Intengo yeBitcoin ishaya u- $ 34K njengoba umthengisi abikezela ukuboniswa kokumelana nempelasonto okusha
I-ZIL Iphuma Ngemuva Kokubhampela Ekusekelweni Kwesikhathi Eside
Zilliqa (ZIL) has been moving downwards since attaining an all-time high in May but has bounced after reaching a long-term support area.
The post ZIL Breaks Out After Bouncing at Long-Term Support appeared first on BeInCrypto.
By Posted on amahora 4 edlule
Ikusasa lobuciko? Abaculi abadume umhlaba wonke bangena kuma-NFTs
By Posted on amahora 5 edlule
Kubanjwe ama- $ 33M Phakathi Kophenyo Lokushushumbisa Imali LaseBrazil
A probe into a suspected money laundering operation has resulted in R$172 million ($33 million USD) being confiscated by civil police.
The post $33M Seized Amid Brazilian Crypto Money Laundering Investigation appeared first on BeInCrypto.
Izintengo zeBitcoin zikhomba iphethini engezansi ye-'megaphone', kanye nokuphuma kuya ku- $ 40K
By Posted on amahora 6 edlule
Ukuhlaziywa kwe-On-Chain: Imikhomo neMinnows Thenga iDip Eqhubekayo
Today’s on-chain analysis provides a look at the behavior of small and large crypto market participants in the context of the ongoing dip.
The post On-Chain Analysis: Whales and Minnows Buy Ongoing Dip appeared first on BeInCrypto.
Ukutshalwa Kwezimali Okuyinhloko kweCore Scientific $ 54M kusuka kuCrypto Lender Celsius
By Posted on amahora 7 edlule
Imboni yeDeFi idonsa emabhange ezentengiselwano? AbakwaSiam babheja ngesikhwama esingu- $ 110M
By Posted on amahora 8 edlule
ICoinbase eshaywa yisenzo sekilasi lezokuphepha kulandela ukulandela uhlu okungama- $ 86 bn NASDAQ
Amazon has published a job listing for a “Digital Currency and Blockchain Product Lead,” at its Seattle offices.
The post Amazon Hiring Executive to Spearhead Cryptocurrency Strategy appeared first on BeInCrypto.
Ukudluliswa kweRipple izigidi ezingama-60 ze-XRP njengoba necala lase-US sec lingena
Ukuqinisa ukuvikeleka kwayo kwesaziso enkantolo efakwe yiSecurities Exchange Commission (SEC), uRipple (XRP) uthi oKhomishani babo ababili abakhulumile bakhulume ngokungacaci ukuthi imithetho yezokuphepha isebenza kanjani kwi-crypto. Khonamanjalo, uRipple noBinance babanjwa ku-radar njengamathokheni we-XRP ayizigidi eziyi-110 abiza cishe
The post Ripple transfers 60 million XRP even as US SEC cuitrawraw on on appeared first on I-CryptoSlate.
By Posted on amahora 14 edlule
I-HODL nje! Izimali ze-Bitcoin ne-Ethereum zisebenza kangcono 'ngemali ephansi' yezinkomba ze-crypto
Idatha evela emibonisweni yeDelphi Digital ephethe i-BTC ne-ETH ibinenzuzo enkulu kunokutshala imali kwizilinganiso ezimaphakathi zemakethe ye-cap cap ne-DeFi index fund.
By Posted on amahora 18 edlule
1 2 ... 1,203 Olandelayo
Trade Forex njengochwepheshe ngalo broker olawulwa kahle kakhulu
Gcina i-Crypto Yakho Iphephile
Shintsha ukuhweba kwakho kwe-Crypto
Bhalisela ukuthola ukukhushulwa kokuhweba kwe-Forex ne-Crypto!
Iba ngowokuqala ukuthola izimemo zokunyuswa kwe-Forex ne-Crypto! Kufika ku- $ 250 kumabhonasi wokuhweba! *
* Amaphromoshini namanani ebhonasi angahluka.
Joyina abanye ababhalisile abangu-537
Inqubomgomo yobumfihlo / Ngenjabulo amandla by WordPress Ingqikithi: Romero.